အနက်ချိန်းတွေ့ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
တွေ့ဆုံနိုင်ငံခြားတရုတ်ယောက်ျားလေးအတွက်တရုတ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကိုကျပန်းအတူနိုင်ငံခြားကြွေမိန်းကလေးများ။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြား၊တရုတ်စကားပြောနှင့်အတူနိုင်ငံခြား၊တရုတ်၊ချက်တင်၊လူတွေနဲ့ချက်တင်၊နိုင်ငံခြားကြွေ၊အသံုုးခ်နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံ၊တရုတ်မိုဘိုင်း၊မထားတရုတ်၊တရုတ်နိုင်ငံ၊တရုတ်၊တရုတ်စကားပြောနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံ ချက်တင်၊တရုတ်စကားပြောအတွက်တစ်ဦးတစ်။ ဤသည်အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အဗီဒီယိုနှင့်အတူချိန်းတွေ့စိမ်း။ သင်တွေ့လိမ့်မည်စိမ်းအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊မျက်နှာချင်း။
စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်အစည်းအဝေးအာရှသောသူယောက်ျားတွေအမှန်တကယ်အသက်ရှင်သောအာရှတိုက်မှာ၊သင်ဟန်လေ့လာသင်ယူရန်တရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အာရှဘာသာစကား။ အဘို့ဤအသီးအသီးဘာသာစကားကို၊ပြီးရှိပါတယ်နာက္ထပ္သင္ယူဤဘာသာစကားသည်ဘာသာစကားစပီထက်၊ဒါကြောင့်အများအတွက်ဝယ်လိုအားထိုကဲ့သို့သောလူ၊ သင်ကဲ့သို့၊ထက်အများကြီးပိုမြင့်ဝါက်(ထောက်ပံ့ပေးကြသည်မှာမြန်မာဘာသာ)။ ကြိုးစားတဲ့ဘာသာစကားချိန်းဆိုဒ်ဖြစ် သို့မဟုတ်။ ဘူးပင်လိုအပ်ပြောဆိုရန်အခြားဘာသာစကား။ အများစုကအင်္ဂလိပ်စပီအကူအခြားဘာသာစကားများမှာကြောက်မက်ဘွယ်သော၊အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲဆိုး၏တရုတ်၊ဂျပန်၊သို့မဟုတ်ကိုးရီးယားသည်၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အားလုံးအခြားသူများ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကအာမခံနိုင်မှာအနည်းဆုံးသုံးပုံတပုံကိုလူအများအသုံးပြုကြသောဘာသာစကားလဲလှယ်ဆိုဒ်များရှိသည်မှာအနည်းဆုံးငယ်လေးတစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဦးနှောက်အကြောင်းလျှို့ဝှက်စွာအများအတွက်ရှာဖွေငယ္ခ်င္းနေသောကောင်မလေး(လျှင်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်)။ တစ်စုံတစ်ယောက်အဖြစ်အ အိမ်သည်လည်းအလွန်ကောင်းသည်။ ဒါဟာအများအပြားရှိပါတယ်အင်္ဂါဒီဇိုင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ သင်ပင်ဖန်တီးအားလုံး၏စာရင်းကိုပြည်သူ့အတွက်ကွန်ယက်များအတွက်မိုင်(ဒါကနည်းနည်းကြောက်စရာ)။ ဤသည်တရုတ်အက္ပ္ကို၊ဒါကြောင့်အများစုဟာတရုတ်လူမျိုးအသုံးပြု။ အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုဒ်များကိုချက်တင်နှင့်အတူအာရှပါဘူး၊သို့သော်အဘယ်အသုံးပြုခဲ့ ဟေ့-သောငှါ၊ဘယ်မှာအာရှယောက်ျားတွေနှင့်မရှမိန်းကလေးများမှသွား။ ဆိုက်မဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊အရာအချက်တစ်ခုပါတယ်။ အဖြစ်မကြာမီသင်အသုံးပြုရန်ကြည့်ဖို့ဆိုက်နှင့်ထွက်ရှာတွေ့မှုအရာသွားကြသည်ကိုဘယ်လိုရှိပါတယ်၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိပါတယ်သုံးစွဲသူအများအပြားမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်မှအသုံးပြုရန်အဘယ်သူသည်တွေ့ဆုံသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်။ စဉ်းစားကည့်ထိုအုပ်စုများဖြစ်ကောင်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစကားပြောနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းကိုသင်ဘာကြိုက်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ ဤအုပ်စုများကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများ၊အရာ၊အရာအားလုံး၏ကြားမှအတွက်လာ၊ကနေရှ။ အချို့လူများကအမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးထားဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနေစဉ်၊အခြားသူများအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြဗီဒီယိုဂိမ်းများမွေ့လျော်။ သင်အမှန်တကယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်အများ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အရှိန်အဟုန်၊ထို့နောက်အချို့အုပ်စုတူအပေးသို့မဟုတ်ကျောင်းမှာပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပိုပြီးပျင်းအမျိုးအစား၊ကစားသမားအဘယ်သူသည်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ကောင်းစွာတို့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြိုင်ပွဲများ၊ရှေ့ဆက်သွား။
အခမဲ့အင်တာနေရှင်နယ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဝင်မည်။ ဖန်တီး၊ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကပါဝင်ပြီးအုပ်စုချက်တင်ချက်တင်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသည်တစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းည့်တရုတ်ထံမှ။ ဒါဟာအစတစ်နေရာမျှဝေနိုင်ပါသည်သင်တို့၏လမ်း၏ကမ္ဘာ၊သင်သည်သင်၏။ ဒါဟာနေရာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်သင်အကြိုက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊အရသိလောကနှင့်တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အတူအလားတူအကျိုးစီးပွား။ အစိမ်းသင်တွေ့ဆုံမီ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ မျှဝေသင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့၍အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုပြောဆိုရန်၏အရှေ့တွင်အစိမ်း။ အကယ်၍သင်ကူညီနိုင်ဖြေရှင်းဘဝရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ၊မေးခွန်းကိုသင်အဖြေဖြစ်ပါသည် သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမနိုင်၊တစ်စုံတစ်ဦးကပြီးသားအဖြေ။ ဗီဒီယိုစကားပြောသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအခမဲ့ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စကားပြောမိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်သူအဖို့ကျပန်းစကားပြောမပါဘဲ။ အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းခြင်းမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဝင်မည်။ လစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံစတင်ရန်။ ။ အေးမြသောနေရာတွင်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကျပန်းစကားကလူ၊နှင့်အဖော်မပါဘဲ။ က်ာ္လြန္ရအရေအတွက်ရှိပါတယ်အခမဲ့ကျပန်းချက်တင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အေးမြသစ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်သည်အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ။ ဒီအကြုံအွန်လိုင်းအခမဲ့။ စကားပြောကြေးကြသည်မဟုတ်။ ချက်တင်နှင့်အတူမရှိဘဲကျပန်းတပါးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး၊အပုဂ္ဂလိကပြောဆိုချက်တင်၊ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများအခမဲ့အဘို့။ ဆက်သွယ်ရန်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအပေါင်းတို့နှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့။ ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထူးဆန်းတဲ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအားကျပန်းမှာ။ က်ာ္လြန္ရတစ်ချက်တင်ဆိုက်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့လက်လှမ်းအကြုံအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အရာသာသင်ခွင့်ပြုချက်တင်နှင့်အတူကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏၊ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့။ ငါတို့ဥစ် အတွက်အခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါကျပန်းတပါးအမျိုးသားထံမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အာရှ၊သြစတြေးလျနှင့်အခြားကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအများ။ စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏လွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဖြုန်းဖို့၊စကားပြောအသစ်နှင့်အတူလူအတွက်စကားပြောသင်ကူညီနိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်စမ်းသပ်မှုသင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်လည်းအဖိုးတန်အခွင့်ထူးမရကြလျှင်၊သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်။ ကိုချက်တင်အတွက်ဤစကားပြောခန်း၊ပဲနှင့်အတူအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စတင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခြေအနေများ၏အောင်မြင်ချက်တင်စကားပြောဆို။ သင်သည်သင်၏အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင်ချက်ချင်းရှယ်ယာဓါတ်ပုံများ၊ဗီဒီယို၊ချက်တင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကစကားပြော၊သင်ဆက်သွယ်သူစိမ်းတွေနဲ့အတူအဘယ်သူသည်သင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကစကားပြော။ စတင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ၊လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသင်ပေးသွားမှာပါနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံ။ အလုပ်ငန်းဆောင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျနော်တို့၏တန်ဖိုးကိုနားလည်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုကယ်တင်၊မယ့်အစားအချိန်ပေးစကားပြောနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊ အဲဒီကျနော်တို့သာရှိဆောင်ခဲ့ပါပြီ၊ဘာမှမဖြစ်ပျက်။ ထို့ကြောင့်၊အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်အ ။ ။ သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းအတွက်အစတစ်အွန်လိုင်းချက်တင်အပေါ်။ တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါအပေါ်မှော်တံခါးကိုနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ သင်စတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်တစ်အွန်လိုင်းချက်တင်။ အွန်လိုင်းချက်တင်လွယ်ကူခဲ့ဖူးခဲ့သည်။ မကြာခဏအများဆုံးရှာရန်ဆိုက်အကြောင်းမပြန်ဖြစ်၊ဆိုက်နိုင်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရှိပါတယ်များအတွက်အချိန်ကြာကြာကာလများ။ အများဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များမဟုတ်တဲ့သဟဇာတနှင့်အတူမော်ဒယ်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း။ အကူအညီဖြင့်များ၏အသစ်သောနည်းပညာနှင့်အကူအညီဖြင့်များ၏ဂူ၊ယခုဖြစ်နိုင်ဖန်တီးရန်အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုဝဘ်ဆိုဒ်ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ချောချောမွေ့မွေ့မဆိုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊တစ်ဦးကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်။ ဒီတစ်ခုခုကိုတစ်ဦးအန္းဖုန်း၊အိုင်ဖုန်း၊သို့မဟုတ်တောင်မှဆေးပြား၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာသင်တို့နှင့်အတူအသယ်၊နှင့်-ချက်တင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းအပေါင်းတို့နှင့်အတူအမျိုးအစားများဖန်နှင့်ဖုန်း။ လိုအပ်လည်းမရှိအက္ပ္ကိုေဒါင္းသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိရာက္ဇာကိုအလွယ်တကူပူးပေါင်းချက်တင်ဆိုက်ယန္တရား။ ရအားအခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊အသစ်တွေ့ဆုံရန်၊ရင်းနှီးသောလူ၊ချက်တင်နှင့်အတူသစ်၊အကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူများ၊နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့နေကြသူလူများထံမှကွဲပြားခြားနားသော။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးသာယာသောအတွေ့အကြုံအသစ်သောအရာသင်ယူခြင်း၊လူသစ်နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှု။ ထိုနေရာသစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူလူအတူတူပင်ခံစားချက်များကိုသင်တို့ဥစ္စာဖြစ်၏။ ချိတ်ဆက်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်အသုံးပြုသူများအားလုံးမှကမ္ဘာအနှံ့၊ကကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်အပင်၏ဇာတိသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ။ စဉ်းစားကြည့်လူအပေါင်းတို့သည်ပျော်စရာစေနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်မှာ၊အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များအတွက်သူစိမ်းတွေ့ဆုံရန်။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောပို့၊ဒါပေမဲ့သူတို့မကျင့်။ ကျနော်တို့စာပို့နာရီအဘို့၊ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအနည်းငယ်ပျင်းစရာကောင်းရုံပို့တနေ့လုံး။ ေက်ာ္လြန္ရ-ရှယ်ယာဓါတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုဖြင့်စကားပြောရန်အစိမ်း၊ကိုကျပန်းအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ အဲလည်းလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမ အသံုးျပဳသူမ်ား၏မှတ်ပုံတင်နိုင်၊ဓါတ်ပုံများပေးပို့သို့မဟုတ်ဗီဒီအွန်လိုင်းချက်တင်။ ဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအပေါင်းတို့အဘို့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်တင်အခုနှင့်စတင်ဝေမျှသင်အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုနှင့်အတူအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရှိတယ်။ သင်ပေးဆောင်စရာမလိုပါတိုင်းတစ်ပြားမှဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောလည်းအခမဲ့၊မခွဲခြားဘဲနိုင်ငံမှလာ၍၊ထိုဝန်ဆောင်မှုအဆဲအခမဲ့။ တွေ့ပြီးစကားပြောဖို့အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အားလုံးအသက်အရွယ်။ တွေ့ဆုံဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများစကားပြောနေစဉ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်အတူ၊သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရသူတို့ပျင်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာ။အခမဲ့ယေဘုယျချက်တင်အခန်းပေါင်းများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကရိုးရှင်းအုပ်စုချက်တင်မဟုတ်ပါဘူးအစဉ်အမြဲအဆုံးသတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့။ သင်ဆက်သွယ်သူစိမ်းတွေနဲ့အတူပုဂ္ဂလိကအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုသိမှရသင့်စကားပြောဖော်ပင်ပိုကောင်း။ အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်းလိုအပ် ရှိနေတဲ့အချို့ပမာဏ၏ကိုယ်ရေးအချက်၊နှင့်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပဲ။ ထို့အပြင်အတွက်အသုံးပြုအွန်လိုင်းချက်တင်၊အရာတစ်ခုခုလည်းမရှိကြောင်းစိတ်တွင်စောင့်ရကြမည်ဖြစ်ကျွန်တော်အစိမ်းနဲ့၊ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကြိုးစားရမယ်တတ်နိုင်သလောက်မသင်တွှေ၊အသုံးပြုသူများအတွက်၊ကျနော်တို့ဆက်ရှိနေရပါမည်၊ယဉ်ကျေးစွာ၊ယဉ်ကျေးတဲ့အတွက်အခြေခံရေရှည်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုး။ လူတူချက်တင်အပေါ်မှာကျပန်းချက်တင်ဆိုဒ်များ၊နှင့်ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်ဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ ကျွန်တော်ကြိုက်ထံမှမရွှေ့ချက်တင်ဆိုက်မှအခြားမဟုတ်၊ကိုယ့်တဦးတည်း။ သူလူမျိုးအဘို့တူသွားကြဖို့တစ်ဦးထံမှအွန်လိုင်းချက်တင်၊ဖိတ်ခေါ်ခံရဖို့မှတ်ပုံတင်နိုင်အမှန်တကယ်အလွန်နာကျင်သည်။ က၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ က်ာ္လြန္ရကမ်းလှမ်းသင်သည်အခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းနိုင်တယ်အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီနဲ့ချက်တင်။ ချိန်းတွေ့နှင့်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အချစ်ခြင်းကိုခံရဘယ်တော့မှမနိုင်လွယ်ကူ၊နှင့်အတူလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံအတွက်စကားပြောမပါဘဲ။ အသက်တာတွင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးကလွယ်ကူသည်မဟုတ်များအတွက်။ တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ အသက်တာ၌၊ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံ၊စိတ်ကျရောဂါ၊တင်းမာမှု၊စိတ်နာကြဉ်း။ အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊အခြားလက်ပေါ်၊အသွင်၊ဒါပေမဲ့သူတို့သက်သေပြခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီများအတွက်နေထိုင်ကြသူများသည်အသက်မျှော်လင့်ချက်။ ရှိမရှိသင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်၊အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊သို့မဟုတ်မည်သည့်အသက်အရွယ်၊အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းပြီနှင့်အစဉ်မပြတ်ခံရလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးနေရာအနာရောဂါကိုငြိမ်းသင်ပေးအချိန်အရည်အသွေးအချိန်။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံနှင့်ခွဲဝေခံစားမှုအလွန်လွယ်ကူသောအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်။ ခံစားချက်ဝှက်၏ရင်ပေးတော်မူသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအကြောင်းပြောဆိုရာ၏။ စတင်ဆက်သွယ်သူစိမ်းတွေနဲ့အတူအခုလိုသွား၊သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့အရောင်စုံ။ စကားပြော နိုင်လွန်ပျော်စရာကောင်းရလျှင်ပျင်းနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျများ။ နှင့်အတူအထူးအခွင့်တင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယို၊နှင့်-ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြု၊သင်တင်ရန်အသင့်ကိုယ်ပိုင်စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကိုဆွဲဆောင်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များ၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အစိမ်း။ အုပ်စုချက်တင်နှင့်အတူ အမြဲဖြစ်ကြပြီးတစ်ပျော်စရာအချိန်ကြသောအခါအဖွဲ့ဝင်များသူတို့ရဲ့အသစ်အကြည့်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံအသစ်။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဖိတ်ခေါ်ရန်လူတိုင်းချွတ်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ဆံပင်သို့မဟုတ်အသစ်ဝတ်စုံယူ၏နံပါတ်များနှင့်အတူသင်စတင်စကားပြောနှင့်အတူ၊လူတိုင်းကိုရှာတွေ့အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဆံပင်။ ဖော်ရွေခြင်း၊ယဉ်ကျေးစွာနှင့်လျောက်ပတ်သောအခါတစ်စုံတစ်ဦးကအသစ်တွေ့ဆုံသည့်အခါသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်းကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ကနေဒါ၊ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျ၊အာရှတိုက်၊နှင့်အခြားကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ အဆိုပါပထမဦးဆုံးအထင်အမြင်လုပ်လိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ရန်အသက်အရွယ်သင်သည်သင်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူစိမ်းသင်ပြောနေတာနေကြတယ်။ စကားပြောကောင်းစွာရောက်စေနိုင်ပါတယ်သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာအမည်မသိ၊သင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်၊ဒါပေမယ့်အ သာလုပ်ကွက်အဘို့အသင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်။ ဧည့်စကားပြော၊ဒါပေမယ့်အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့အကောင်းဘက်၊သင့်လျောက်ပတ်နှင့်သန့်ရှင်းသောစိတ်သဘောထားကို၏အားကြီးသောအွန်လိုင်းဆက်ဆံရေး။ သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကိရိယာကိုဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြော။ ပို ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်သင်ရှိသည်၊အန္းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ။ တွက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါသည်နှင့်ပြုမူသည်ကိုအတိအကျတူတစ်ဦးကမိုဘိုင်းအက်ပ်အချိန်မှာသာ၊ဒါကြောင့်သင်သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှမဆိုစက်ကိရိယာ။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်များ၏စာရင်းတစ်ခုအသုံးပြုသူများအကြိုက်ဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုပြီးမိတ်ဆွေစာရင်း။ အလွယ်တကူနှင့်အဆင်ပြေရှာဖွေအားလုံးသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းအတွက်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိတ်ဆွေစာရင်း။ နိုင်ငံခြားစကားပြောအခါကတစ်ဘက်ပေါင်းစုံလူမှုကွန်ယက်ဒါကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှလိမ့်မည်နှင့်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီ။ ငါတို့သည်ငါတို့ကြိုက်က္ျ၊ကျနော်တို့အတူနေ၊နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပေါက်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ချက်တင်-မမေးသင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ကျနော်တို့လိုအပ်ပါဘူးပေးပို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ ကိုယ့်ရွေးအလိုရှိသောအသုံးပြုသူအမည်။ မှတ်တမ်းအဖြစ်ဧည့်သည်နှင့်အတူစကားပြော။ ကလွယ်ကူမယ့်ဖွင့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောကြောင်းကိုသင်၏ပထမဆုံးနေ့အဖြစ်၊စည်းမဲ့ကမ်း အနည်းငယ်နှောင့်ရှက်ဆွဲဆောင်၏အာရုံအားလုံးအသုံးပြုသူများ။ ထိုအခါသင်ဘာလုပ်ပါသလဲ?"ရုံနှင့်အတူစတင်နှုတ်ခွန်းဆက်ဖြစ်ဟန်၊ဒါပေမယ့်အဘယ်သို့ရဲ့ကြောင်းကိုသင်စတင်အောင်။ မဆုံးရှုံးပါဘူးင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မှမည်သူမဆို၊သတိနဲ့လုံလုံခြုံခြုံနှင့်အမည်မသိ။ ကျွန်တော်မသုံးကြဘူး၊လူမှုမီဒီယာပြီးတော့ကျွန်မတွေ့ ။ မြက်ခင်းပေါ်တွင်ကြောင့်အခမဲ့၊နှင့်ယခု၊ငါကနဤအရပ်သည်-ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်င့်။.
အွန်လိုင်းတရုတ်ချက်တင်ကစားတဲ့၊ချက်တင်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊အခမဲ့တရုတ်၊တရုတ်နိုင်ငံ ချက်တင်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်တရုတ်ယောက်ျားလေးအဖို့အခမဲ့နှင့်လွယ်ကူသော။ သဘာဝလောကကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ထိန်းသိမ်း၊အမြင့်ဆုံးအမြင်အာရုံအလှတရားအတွက်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်၊နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအရင်းအမြစ်၏အသိပညာတိုးစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအတွက်။ ဤသည်အမှန်တကယ်အကြီးမြတ်ဆုံးအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသဘာဝအသက်တာအသက်ရှင်ရကျိုးနပ်။ တူမှလှုံ့ဆော်မှု၊သဘာဝကျနော်တို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစကားပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်သူစိမ်းတွေကိုပြောနေတာ၊အစည်းအဝေးအစိမ်း၊အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကဲ့သို့ကျပန်းချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှတရုတ်နိုင်ငံ၊တရုတ်ကင္မရာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူချက်တင်၊အွန်လိုင်းချက်တင်၊မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနှင့်အတူအရောမိန်းကလေးမှတရုတ်နိုင်ငံ၊တရုတ်စိမ်းတွေ့ဆုံရန်ပြောဆိုဖို့ထူးဆန်းအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးမှတရုတ်နိုင်ငံ၊ပျော်စရာများ၊ချက်တင်အတွက်တရုတ်စကားပြောခန်း၊စကားပြောကင်မရာ၊ဝှက်၊ကျပန်းအချိန်လေးနှင့်အတူလှပသောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှတရုတ်စကားပြောအတွက်မှတစ်ဦးတစ်ယောက်၊အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အများကြီးပိုထည့်သွင်းဖို့အကောင်းကံ၏ကွော။ တရုတ်လျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းကျပန်းအတွက်စိတ်ခံစားမှုနွေးထွေး၊ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့တန်ဖိုးတွေအများကြီးသောသူတို့အဘို့ပူဇော်။ စကားပြောပိုင်ရှင်ပဲအစစ်အမှန်အရာအားဖြင့်ပါဝင်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးစကားပြောခန်း၊စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊တရုတ်ထံမှတိုက်ရိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးစကားပြောနှင့်အတူဒေသခံတရုတ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊အခမဲ့ချက်တင်နှင့်အတူ ကမ်များ၊ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကင်မရာချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှတရုတ်နိုင်ငံ၊သင်သည်လည်းပါဝင်မကြက္ချက်တင်သို့မဟုတ်"တရုတ်စိမ်း"စကားပြောခန်း၊တရုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်၊တရုတ်ဝက်ဘ်စကားပြောခန်း၊တရုတ်ပြည်တွင်း စကားပြောခန်း၊တရုတ်စကားပြော၊အခမဲ့တရုတ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊တရုတ်ဒေသခံချက်တင်။ ချိန်းတွေ့တရုတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အမည်အရမ်းပျော်စရာ၏အသက်တာ၌။ မရှိပါကပရမ်းပတာအတွက်မှတ်ပုံတင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်။ နောက်ထပ်၊ဒါကြောင့်အကျော်ကြားဆုံးအရင်းအမြစ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုတခြားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊၊ချက်တင်ကစားတဲ့၊ကြွေဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊စသည်တို့ကို။
ပင္သစ္လူမ်ိဳးမကြာခဏထီင္ငံျခားသားမ်ား။ အမှန်တရားအကြောင်းထိုင်းတရုတ်မိသားစုများအများအားဖြင့်အထက်တန်းအစား။ အဲဒီမိန်းကလေးငယ်များ-အထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းမိန်းကလေးများ-အလုပ်ဆင်းကြည့်သူတို့အပေါ်မှာသူတို့အပေါ်မူတည်တဲ့အချက်တွေအများကြီး။ ဒါဟာလည်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောဆိုရန်အတွက်ပြည်သူ့ဖိုရမ်။ ဖက်ရှင်အတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ထိုင်းတရုတ်မိန်းကလေးများ-ကိုးရီးယား။ အဲဒီအရင်က၊ဖက်ရှင်ခဲ့ဂျပန်နှင့်ပင်ကြာကြာ-အနောက်ပိုင်း။ ကတည်းကထိုင်းအမျိုးသမီးများမှာတော့အားလမ်းကြောင်းများနှင့်ဖက်ရှင်၊ဒါဟာလိမ့်မည် လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ။ လျှင်သင်အချိန်ဖြုန်းအတွက်အနူ။ ဤသည်ကြီးမားသောအလတ်တန်းစားအိမ်နီးနားချင်း။ ငါ့အကြံဥာဏ်ဖြစ်ပါတယ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အတွက်ကဖေးနှင့်နေရာတိုင်း။ ကြိုးစားစတင်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါဘူးသေချာပေါက်ပါဝင်ပတ်သက်"ထိုင်းလူမှုရေးဖိအားများ"အပေါ်။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးဒါမှအထိခိုက်မခံကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လူမှုဖိအကြောင်းရှာတွေ့ရန်ခက်ခဲရောနှင့်အတူအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခံရပြီးတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်အခြားလိုက္လာေ။ ဒါကြောင့်ထးနေရာကောင်းများမှာအစည်းအဝေး။ သုံးမည္တူ၊ကင်းထောက်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် ၊တည်နေရာသည်မှန်ကန်သော၊အစဉ်အတွက်အကြောင်းတရားလျှင်သင်လည်းရှက်စေဖို့တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်မှု။ ကတည်းကကေးရှင်းအပေါ်မူတည်၍၊သူတို့သည်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပေါင်းစပ်ထံမှမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူဒီကဧရိယာပါ။ မကြောက်ပါနဲ့ပြောပြရန်အတွက်အသင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့ကတန်ဖိုးရိုးသားမှုနှင့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးဖွယ်ရှိလက်ခံရန်နေ့စွဲ။ ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေ့ဆုံမိမိထိုင်းမယားအတွက်အကော်ဖီ။ သူတွေ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွား ။ အခြားကောင်းစွာပညာတတ်ထိုင်းသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေလည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းကအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ယခုမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဘဝနှင့်အတူသူမ၏ခင်ပွန်း။ ငါသည်လည်းအကြောင်းကြားရတဲ့အကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီနောက်ခံပုံများသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အသီးအသီး။ သူတို့ပေးဆောင်ရပါမည်အခကြေးငွေပေး၊သင်တို့၏စစ်မှန်သောအချက်အလက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များအကြောင်းတှေ့နိုငျသင်တို့အဘို့အဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြားလမ်း။ အမျိုးသမီးများအလွန်အားကြီးသောယဉ်ကျေးမှုအဆက်သွယ်၊သူတို့အခဲမှအနီးကပ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်လျှင်၊သူတို့အနိုင်နိုင်လူသိများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်(တကယ်တော့၊လျောက်ပတ်သောအမျိုးသမီးများသောအားဖြင့်မတက်ရောက်ချိန်းတွေ့ဖြစ်ရပ်များ)။ သင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရပါမည်သို့မဟုတ်သူမ၏အဖြစ်မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သူမ၏နီးစပ်မိတ်ဆွေများကိုမဆိုမျိုးကိုစတင်၏မည်သည့်ပုံစံပါ။
ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်တဲ့လူမျိုးနှင့်ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသောနှင့်အတူ၊အဘယ်သူကိုသာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောဆို၊ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းငြိမ်ဝပ်စွာနေ၊နှင့်သင်ရုံပျော်မွေ့။ အစုံဖတ်ရန်အမျိုးသားအသက်အနှစ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကို:ငါအဘို့ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလေးအနက်သူသည်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ထပ်၊နှင့်လည်းလည်ပါဉီး၏အသက်တာရှည်ဆက်ဆံရေးကဲ့သို့သောအဖြစ်။ အစုံဖတ်ရန်အမျိုးသား အသက်အနှစ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကို:သင်ယဉ်ကျေးမှု၊ပေးချစ်ခြင်းမေတ္တာစာရေးနှင့်အချစ်ကိုခံယူခြင်းငှါချစ်။ ကျနော်တို့မျှဝေဖို့ရှိသည်ရှိသမျှအတွေ့အကြုံမွေ့လျော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ငါကြည့်ရှု။ အစုံဖတ်ရန်အမျိုးသားအသက်အနှစ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကို:ရှာဖွေနေအဘို့အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အနာဂတ်မိတ်ဖက်အသက်တာ၌။ ငါ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာသကပါကြောင်းကိုစပ်စုနီးပါးအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်မနှင့်။ အစုံဖတ်ရန်အကောင့်သစ်ကိုဖန်တီးမှတ်တမ်းအတွက်ေမ့သင့်စကားဝှက်ကိုမှန်ကန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ပထမဦးဆုံးကက်တစ်ဦးချင်းစီကိုရှာရန်'ညိဳေရာင္ '၊သူစီးတဲ့ေမးခြန္းလိုဖန်တီးရန်ကောင်းတစ်မိသားစု။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်သာလိုအပ်ပါတယ်ဖို့အချိန်ရောက်ကြှနျုပျတို့ဖြည့်စွက်အတွက်မေးခွန်းလွှာများ၊န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်ရှာစတင်ခဲ့။ အရေးအပါဆုံးကောင်းကျိုး•စမ်းသပ်နှင့်တိုးတက်လာသောအမှန်ချိန်းတွေ့။ •အားလုံးနည်းလမ်းများကိုတင္ေဝန်ဆောင်မှု။ •သင်ဖယ်ရှားပစ်ရ၏အန္တရာယ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လိမ်လည်။ •ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစစ္မလိုလားတောင်းဆိုဖို့။
အများအပြားနှင့်မတူဘဲအခြားလူများ။ သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်အတူဒေသခံအမေရိကန်များ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်။ နံပါတ်တစ်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်။ အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ကတည်းက။ မျက်စိကန်းသောရက်စွဲ။ ။ အဘယျသို့ထားခြင်းဖြစ်သည်? လှောဦးခ်င္း။ ဆိုက်ဘာချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ရှိ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုဝဘ်ဆိုက်ကိုဝင်မည်နှင့်အတူယခုလူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအခမဲ့အွန်လိုင်းစကားပြောဆိုက်သင်ရှာကြသည်အတွက်မှတ်ပုံတင်။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ယူ၌မွေ့လျော်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စကားပြောမပါဘဲသူငယ်ချင်းများ၊အဟောင်းကမ္ဘာ၏။ ဤသည်အမြန်နှုန်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျောင်းသား လူဦးေ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်တွင် ။ ချင်လျှင်သင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဗြိတိန်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆက်သွယ်တစ်ဦးတစ်နီးရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်နှင့်လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အဘယ်ကြောင့်လှောထောင်ပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအဘို့အအခမဲ့များအတွက်အွန်လိုင်း? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ဂုမပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းများ၊လယ်သမားများ၊မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗီဒီယိုပစၥည္းမ်ားအကြိုက်နှင့်အတူစကားပြောရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတစ်ဦးတစ်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ နှစ်ဦးစလုံးညွှန်ကြားမည္စတင်စကားပြော၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့နှင့် ။ နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်သတင်းစကားတစ်ခုစတင်ကွဲပြားသောကျောင်းသားလူဦးေ။ ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးတစ်။ နှင့်အတူစကားပြောဒေသခံခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ရှာဖွေနေကြသည်မှဆင်းစကားပြောခန်းဝက်ဆိုက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳတွေ့ရှနှင့်အတူချိတ်ဆက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဒၚချက်တင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ဗီဒီယိုဝဘ်ဆိုက်အတွက်ထောင်ရေးအေဂျင်စီကအမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့သည်။ ဂုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့အဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်၊တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားလူဦးေ။ မျက်စိကန်းသောရက်စွဲ။ အမည်မသိနှင့်ရရှိနိုင်အခမဲ့တိုက်ရိုက်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းကိုရှာတွေ့သည့်နေရာသင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ အရာ၌ဝှက်ထားသောစွဲချက်? တွေ့အမှန်တကယ်အသက်ရှင်နိုငျသောမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုအစီအစဉ်ရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့၊ညစ်ပတ်စကားပြောခန်း? ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမြေမိတ်ဆွေတို့ရေသာ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချက်တင်ခန်းနှင့်စကားပြောမပါဘဲ။ ဝဘ်ရက်စွဲသည်မေတ္တာ ရည်းစားသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ဘယ်မှာသင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်ချိန်းတွေ့တစ်ဦးတစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက္ပါ။ အိန္ဒိယ။ ။ မည်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအသက်ရှင်သောချက်တင်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ။ ကစားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ သင့်ရဲ့ဧရိယာ။ ချက်တင်ကအရမ်းအရေး၊အခမဲ့ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကုထုံးများအခမဲ့ချက်တင်နှင့်အတူလက်ငင်းမန်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲအတက်လက်မှတ်ထိုးသီးသန့်ဆက်သွယ်ဖို့လူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းခရစ်ယာန်တစ်ဦးတစ်။ ငါတို့အဘို့အချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဘဏ္၊ထိုင်အတွက်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့။ ဆိုက်ဘာချိန်းတွေ့တဲ့ဆက်ဆံရေး။ အချို့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အသိုင်းအတွက်တစ်ဦးတစ်သတို့သမီးကလပ်မီးတဦးခ်င္း။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဖြုန်းဗီဒီယိုပစၥည္းမ်ား ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်ဖြစ်စေလျက်၊ရှိသမျှကျော်ထံမှလူအနိုင်လောက်ဟဲဗီးဝိတ်၏ ဆိုက်နှင့်အတူနေ့စွဲ ။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ချစ်ရောအမြန်နှုန်းအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ထောင်ရေး၊မဝင်နှင့်အမျိုးသားများသည်၊နှင့်အောင်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန်။ သောကြောင့်၊။ ကစားအွန်လိုင်းမိတ်ဆွေစာရင်း၊ချစ်ကြည်ရေးစသည်တို့ကို။ အမည်မသိနှင့်အောင်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာလယ်သမားသာ။ မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်စကားပြောခန်းတွင်နေထိုင်သောဤဖို့ရရှိနိုင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖွဲ့ဝင်များ။ လက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ပုံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုရှာဖို့ရှာနေနှင့်အတူနိုင်ငံအခြေစိုက်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ။ ယခုတစ်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့။ နံပါတ်များအဖြစ်ချစ်သူများနေ့အချိန်စွမ်းအင်ကို:ချိန်းတွေ့များအတွက်ညွှန်ပြ။ မေတ္တာသည်အကောင်းဆုံးချက်တင်အခန်းသည်မကဲ့သို့ဤအသင်သည်သင်၏အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်။ အဘယ်ကြောင့်လှောဦးခ်င္းကြော်ငြာတွေရှာဖွေနေလူများအတွက်။ ၡမ်ားစကားပြောခန်း၊သူငယ်ချင်းများအဘို့အစာရင်းဖြစ်သည်၊အဟောင်းများအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းတည်း၊။ နှစ်ဦးစလုံးညွှန်ကြားမည္စတင်စကားပြော၊ငါၡမ်ားပေပ်ာက္ေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုဒါကြောင့်ကျနော်တို့တစ်ချက်တင်ဆိုက်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ရှာတွေ့အဘယ်သို့သောအ အခမဲ့အွန်လိုင်းဒါကညာဘက်အရပ်၊ခမဲ၊အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊တွေ့ဆုံရန်။ စကားပြော:စတင်စကားပြောခန်းအဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်။
ဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဒီလင့်များရှင်းလင်းရန်၏သမိုင်းမရဘူး။ ဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဒီလင့်များရှင်းလင်းရန်၏သမိုင်းမရဘူး။ သတ်မှတ်ချက်များ-ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ-ရာဖယ်ရှားရေး-တင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို-ကိရိယာကိုဒေါင်းလုဒ်မီးေဗီဒီယို-ကြော်ငြာဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဤလင့်ခ်ကိုဒီမီနူးသည်မွမ်းကြသည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ အချက်အလက်များသာကယ်တင်ခြင်းဒေသ(သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်)နှင့်ဘယ်တော့မှမမှလွှဲပြောင်း။ သင်နှိပ်နိုင်သည်ဤလင့်ခ်များ
ဒီ ။ အကြောင်းစဉ်းစားသည့်အခါလူတိုင်းထင်ရဲ့အဆုံးအကျင့်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလူ့အပြန်အလှန်သို့မဟုတ်ကဲ့သို့တစ်ခုခုဖြစ်။ ဤကိစ္စတွင်မကဒီအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲ။ အ အသုံးပြုသူအဘယ်သူ၏အကောင့်ရှိရသည်မှာဖျက်ထားသည်ကတည်းကတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ၏မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးထိုင်ပေါ်မှာပန်းခြံခုံတန်းလျားပေါ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ သူခေါ်က:ဤလမ်း"ငါတွေ့သောဒီပြင်သစ်တွင်အမျိုးသမီးစကားပြောခန်းအများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း။ သူတို့မဖြစ်ကြ၏ပထမဦးဆုံးစုံတွဲရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့အတွက် လက်စ်နှင့် ရော်ဂျာတွေ့ဆုံဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မှာ၊အရနေ့စဉ်အၾကိဳက္ဆံုး။ တူ အသုံးပြုသူနှင့်၊အဆိုပါရော်ဂျာခဲ့ကြကနေဖန်ဆင်းတော်၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်၊ထိုသို့အလုပ်လုပ်တယ်။
ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အမွေဥစ္စာ ပြဿနာများပေါ်လာကြောင်း အိမ်ခြံမြေအတော်လေးတွေအများကြီး။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အမွေဥစ္စာချောချောမွေ့မွေ့သွားသင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အရာအားလုံးမှန်ကန်သောအမြင်မှသည်ဥပဒေ၊နှင့်ဤအလိုအထူးကုအကြံဥာဏ်အတွက်အမွေဥစ္စာ။ ဥပဒေရေးရာအကူအညီအတွက်အမွေဥစ္စာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ငြင်းမွေဥစ္စာကိုအတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးလိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများသက်သေအထောက်အထားကိုအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ဖို့အပြုအမူ၏ပြိုင်ဘက်။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများမှန်ကန်သောအပညတ်တရား၏အမွေဥစ္စာ၊ယုံကြည်သောပညာရှင်များကူညီနိုငျသောလုံးဝအခမဲ့။ ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဉာဏ်။ ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်အမျိုးသမီးရဲ့အွန်လိုင်းသင်လက်ခံရရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေအထောက်အကူ။ အရည်အချင်းကျွမ်းကျင်သူများကအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ပါသည်ပြင်ဆင်မှုများနေသနှင့်အခြားအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်တဲ့အခါ။ သင်ရွေးချယ်ရှေ့နေအမည်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရှင်းပြထင်ရှားတဲ့အမှတ်။ သင်သည်လည်းပေါ်ရေတွက်ထောက်ခံမှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်၊သောအခါထိုကိစ္စအငြင်းအပြီးတွင်ဆုံးဖြတ်လေသည်။
မော်စကို၊ ကြီးမားတဲ့ရုမြို့၏လူဦးရေနှင့်အတူလူပေါင်း ၁ သန်း။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းယနေ့သည်ကြွယ်၊မြို့ရှိအများအပြားတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကဒီမှာ။ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းအလုပ်အတွက်အသင့်ရဲ့မြို့၊ထို့နောက်မော်စကို၊ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်ရုံထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းသင်တို့အဘို့အ။ လည်းအစာရှောင်ခြင်း။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊မြို့တော်ကိုပြီးသားမှတ်ပုံတင်သာ ။ ဤအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမျိုးမျိုး၏မြေးဆက်အကြောင်းစတင်ပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊မင်၊လူမှုရေး၊နှင့်အသီးအဘို့အသက်အရွယ်-သင့်လျော်တဲ့အတိုင်း။ ဒုတိယအ၊အဆင်သင့်သောအခွင့်အလမ်းကိုဖွင့်ဖို့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်မော်စကို၊ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ ဝက်အူကိုအမည်မသိဖြစ်ပါသည်။ သင်ဖလှယ်နိုင်ပါအားလုံးလိုအပ်သောမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်အစက်အပြောက်မပါဘဲ အကောင့်ကို။ ဆာဗာ၊ဒါပေမယ့်အမှန်ဖုန်းအရေထင်ရှားလိမ့်မည်။ အကြီးဆုံးကတော့၊ငါတို့သည်ပူဇော်ဓာတ်ငွေ့ထုိင္းမော်၊အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ။ သင်မြင်စေခြင်းငှါအခြားအခွင့်အနာဂတ်အတွက်၊ဒီဆိုက်ကသင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်အဟော။ အနာဂတ်မှာ၊ဆိုက်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်သင့်ပရိုဖိုင်း။ ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ ချိတ်ဆက်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ။
သူမ၏စာအုပ်၌"ခင်ပွန်းလဲလှယ်၊" ကပြောပါတယ်၊"လူ့သတ္တဝါတို့သည်ခက်ခဲ-ကြိုးအောင်။ ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အများအပြားတွင်စွမ်းရည်၊ယှဉ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ရှည်လျားအကြား၊ကွဲပြားခြားနားသောလိင်၊နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပအများ၏အနက်နီးပါးတစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံပူးေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထောင်။ "ဆက်ဆံရေးမဟုတ်အဖြစ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်သူတို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြု။ လူတွေကအခုအဓိပ္ပါယ်ကတိကဝတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်း၊လမ်းအလုပ်လုပ်တယ်သူတို့အဘို့အ၊နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထွန်းနှင့်အတူသူတို့အဓိပ္ပာယ်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်မရှိတော့ကိုယ့်အတွက်တစ်ဦးတစ်—ဒါဟာအစအဘို့အရှာဖွေနေစုံတွဲများမှနီးစပ်၊အမွှေးအကြိုင်တက်သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝနှင့်တွေ့ဆုံလိုစိတ်နှင့်ယောက်ျား အမျိုးသမီး။ ဘတူတူကိုဆောင်ခဲ့အဆိုပါထိပ်တန်းစုံတွဲများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကြည့်မြင်သောတဦးတည်းကအကောင်းဆုံးအသင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့စုံတွဲအမျှအမျှအပေါ်ကြိုဆိုရွယ်ရောက်ပြီးမိတ်ဆွေသစ္မ်ား၊အကြီးဆုံးဆိုဒ်များများအတွက် ၊၊ရေးရာများ၊နှင့်အခြားၡမ်ားတွေ့ဆုံ။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်ဖြောင့်၊လိင်တူ၊လိင်တူချစ်သူတွေ၊လိင်စိတ်ပြောင်းသန္ဓေ၊သို့မဟုတ် —အရွယ်ရောက်ပြီးမိတ်ဆွေရွာေဖြရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင်တို့၏ပြည့်စုံသောပွဲစဉ်(သို့မဟုတ်ခြစ်)၏ထွက်င့်သန်းအဖွဲ့ဝင်။ အပေါင်း၊ကိုယ်ငွေမကောင်းကဒီမှာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ဦးစံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လုံးဝအခမဲ့နှင့်ခွင့်ပြု၊သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့၊တက်လက်မှတ်ထိုး၊ရှာဖွေရေး၊နှင့်ရော။ စုံတွဲများရှာဖွေနေတက်မြိန်ဖို့သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝလိမ့်မည်အိမ်မှာမှန်ခံစားရအပေါ်ယုတ်ဖြစ်၊ဘယ် ၊၊အကျိုးရှိတဲ့မိတ်ဆွေများ၊၊ကုန်းတိုက်တွန်းကြသည်မဟုတ်၊ငုံ့ကြည့်။ ဒါဟာအခမဲ့ဆိုက်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကြီးထွားလာသည်သိသိသာသာလစဉ်လတိုင်း၊သင်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ရေးအခံရ ။ ဖြစ်ယုတ်အသုံးပြုသည် စာဝှက်ရန် ထိန်းသိမ်းထားအားလုံးသင့်ရဲ့အချက်အလက်လုံခြုံပြီးကာကွယ်တားဆီးဖို့လိမ်လည်မှ၏အားသာချက်ယူ။ အတတိယအသင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်စူပါလွယ်ကူသောအပေါ်မိတ်ဆွေရွာေဖြ:)ကိုရွေးသင့်ရဲ့လိင်။) ရွေးလိင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်။) သင့်အသက်အရွယ်၊တိုင်းပြည်၊နှင့်ဇစ်သို့မဟုတ်အမည္ကိုုရွာပါ။) သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်၊မျက်နှာပြင်အမည်ကို၊နှင့်စကားဝှက်ကို။) စတင်ရှာဖွေပြီးရော။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်ဒီ၏အစိတ်အပိုင်းမိတ်ဆွေရွာေဖြ။ ဆိုက်ကိုအမြင်များကိုသန်းပေါင်းများစွာသောဧည့်သည်များ၏လစဉ်လတိုင်း၊ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းစတင်ရန်။ လိင်နှင့်ချွန်မောင်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အားပေးတိုက်တွန်းခံရဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးသားများအပေါ်။ မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့အလိန်အဖြစ်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ချင်းစုံတွဲသူသို့တယ်၊လွန်း။ လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာသည်ဆိုက်ကိုများကိုအတူသင်၏ဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းအသက်အရွယ်၊တည်နေရာ၊နှင့်အီးမေးလ်။ ပြီးနောက်၊ကျန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်ရှိဖို့ထွက်လှည့်-ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများအပေါ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သောအမျိုးသားများအတွက်နိုင်ငံတော်မှစေလွန်လိုက်ဖက်တဲ့များအတွက်အကြံပြုချက်များ။ ရှာဖွေခြင်းတတိယသို့မဟုတ်အပိုထည့်သွင်းဖို့သင်၏မိတ်ဖက်အဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်ချွတ်ကျသွားတဲ့ မှတ်တမ်းအပေါ်ဆက်ဆံဦးခ်င္း။ ကူးအသန်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြဆက်ဆံသို့မဟုတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာသူတို့အွန်လိုင်းသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာ။ နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူတို့ကိုေပးပါသွင်ရော၊အလည်အပတ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ပုဂ္ဂလိကမည္၊ဒါမှမဟုတ်ပင်သုံးနေထိုင်နှစ်ခု-လမ်း။။။။။ သငျသညျခန့်မှန်းနိုင်ပါကမှအမည်— သည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အတွက်စုံတွဲများနှင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ရှာဖွေနေယုတ်ပျော်စရာဖြစ်စေ၊သူတို့တညဉ့်ရပ်တည်ချက်၊ သို့မဟုတ် ၊သို့မဟုတ်အုပ်စုကိုလိင်။ ထက်ပို။၊အဖွဲ့ဝင်များတက်အောင်အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်း၊နှင့်အသင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါသူတို့နှင့်စတင်စကားပြောချက်ချင်းစာသားကနေတဆင့်သို့မဟုတ်ဗီဒီယို—အခမဲ့။ ချိန်းတွေ့စုံတွဲများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဖော်ရွေပြီးပွင့်လင်းစိတ်ထား၊ဒါကြောင့်သင်အမြန်သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပါဘဲတရား။ ဖြောင့်၊၊လိင်နှစ်မျိုးစလုံးရှိပြီးအမျိုးသားနှင့်အားလုံးကြိုဆိုတက်လက်မှတ်ထိုးရန်၊မိမိတို့ပို့စ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများ၊နှင့်ရာက္ၾပရိုဖိုင်း၏ၡမ်ားအနီးအနားကလူ—အဘယ်သူမျှမကကုန်ကျစရိတ်မှာ။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောစုံတွဲများချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသူတို့ရဲ့မစ်ရှင် ကချိတ်ဆက်ဖို့လာက္တင္ထားနှင့်အတူအခြားလာက္တင္ထားများအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊အကြံဉာဏ်တွေ၊နှင့်နေ့စွဲညဥ့်အရင်း—မ ။ ယုံကြည်"အတိုင်းအသက်ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ခပ်သိမ်းသောစုံတွဲတစ်တွဲအဖက်၊"နှင့်သူတို့အကူအညီသင်ရှာတွေ့နှင့်ကိုက်ညီသောအခမဲ့။ သုံးဘက်စုံအခ်က္အလက္မ်ားကိုစားသံုးသူအမှုအရာကဲ့သို့အလားတူအကျိုးစီးပွား၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၊တည်နေရာ၊နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်များ။ " နှင့်အဆိပ်ရှိတိုက်ကပ်နွယ်ပင်ရှိသည်နိုင်မ- ဆက်ဆံရေး၊ဒါကြောင့်သင်၊"သောစကားများနှုတ်အပေါ်သင်ကာ္အသွယ်—တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများအတွက်ယုံကြည်သူအဆထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် မ-တစ္လင္တစ္မ၊ပွင့်လင်းဆက်ဆံရေး၊ပွင့်လင်းလိင်၊။ စံဝင်နိုင်အောင်အသိအမြင်အခြားသူများအတွက်ဒေတာဘေ့စ၊အကယ်ဖစ္သိမ္းေပးပါသွင် ၊ႏမျိုးမျိုးသောကာ္အေအရင်းအမြစ်များ—အပိုက်ဆံအိတ်လိုအပ်နေပါသည်။ နောက်လိုက်အဆင့်သုံးဆင့်အပေါ်ငါ့ နှင့်သင်၏အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြည့်စုံ၏။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်။) အ။) ၏မွေးဖွားရက်စွဲ၊တည်နေရာကို၊ပိုနှစ်သက်။ ဤအပါဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုံတွဲ၊ယောက်ျား စုံတွဲတစ်တွဲ၊အမျိုးသမီးစုံတွဲ၊သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးတည်း။ ထိုအခါ ၊မိတ်ဆွေများ၊ရက်စွဲများ၊နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုပါတယ်ရုံထောင့်ပတ်လည်။ အပြည့်အဝရှိကြသည်မကြာခဏအမည်ရှိသောအကြားအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များများအတွက်စုံတွဲများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာနေသောလူများအတွက်အမှန်တကယ်ဆက်ကပ်အပ်နှံအ ။ သာမောင်နှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်၊ပေးပို့ပြီးလက်ခံချက်တင်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ပူးပေါင်းအုပ်စုများ၊နှင့်အမြင်ဖြစ်ရပ်များ၊နှင့်အားလုံးအတှကျလုံးဝအခမဲ့သူတို့ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ အမွတ္ဝှက်ထားသောအခကြေးငွေကိုသွားဖို့ပေါ်လာအကြာတွင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်စုံတွဲများပေးရေးဝန်ဆောင်မှုဖို့ကြိုက်သူလူအသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအဖြစ်အနည်းငယ်လျော့နည်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှင့်အနည်းငယ် ။ ဒါကြောင့်၊လာမယ့်အချိန်သင်ထည့်သွင်းတတိယ(သို့မဟုတ်စတုတ္ထသို့မဟုတ်ပဉ္စမ)ထိုရောနှောဖို့၊ကိုးကားစာရင်းထက္။ ကျနော်တို့ကတိပေးပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်အယ်ဒီတာချုပ်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်၊ငါသည်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရာမဟာဗျူဟာ၊လူမှုမီဒီယာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၊နှင့်မီဒီယာအခွင့်အလမ်း။ အခါငါဟာအရေးအသားအကြောင်းဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ငါ၏အနှစ်အချစ်ကိစ္စနှင့်အတူဒို၊ငါနားထောင်ခြင်းမှအမွားမ်ား၊ ဟယ်ရီပေါ်တာကိုကြည့် (ကျွန်တော်တစ်ဦးမာနထောင်လွှား ။)၊ သို့မဟုတ်သောက်သုံး ။ ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်ချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူများသူငှပညာတွင်'ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုချိန်းတွေ့'နေ့စဉ်။ ခွင:အလွန်ကြီးစွာသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလုပ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာအားလုံးအပေါ်ကမ်းလှမ်းပေးအပ်သည်။ သို့သော်၊ဒီအချက်အလက်ပေးအာမခံမရှိဘဲနဲ့။ အသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပံ့ပိုးပေးသည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်လက်ရှိစည်းကမ်းချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံလျော်ကြေးမှအများအပြားကမ်းလှမ်းအပေါ်ဖော်ပြထား။ အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချက်များ၊ဒီလျော်ကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လိုအဘယ်မှာထုတ်ကုန်များပေါ်လာဝဗ်ဆိုက်(အပါအဝင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အရာအတွက်အမိန့်သူတို့ပေါ်လာ)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်င္သည္တစ်ခုလုံးကိုဠာ၏ရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှု။ အယ်ဖော်ပြထင်မြင်ယူဆကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်းကြပ်စွာအစားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်မထောက်ပံ့၊ထောက်ခံ၊သို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကြော်ငြာ။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ကျွန်တော်သေချာမဘယ်မှာကြည့်ဖို့အမျိုးသားများအဘို့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ငါ၏ကလပ်အသင်း။ ယောက်ျားတွေသာလိုတညဉ့်ရပ်တည်ချက်နှင့်အချိန်အများစုမှာသင်မနေဒါမူးကအေးစေချင်တယ်၊ပိုပြီး၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်ကောင်လေးသင်သည်ချိန်းတွေ့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတူပျော်ရွှင်စရာရှိသည်ငါလုံလောက်တဲ့ဟောင်းမကိုးကွယ်အားကိုးဖို့တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးရည်းစားအခုအချိန်မှာ။ ေျပာသည္။"အဆိုပါပြဿနာကိုရှိသည်သောပဋိပက္ခအခြေအနေ။ သူတို့ပြောချင်တဲ့အတွေ့ဆုံရန်ပါဘူး၊ကိုယ့်ရရန်ကြိုးစားနေအတွက်အသင့်ရဲ့ဘီမ်ား၊ သို့သော်သင်သည်လည်းသင်ချင်ကြပါဘူးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အဆိုပါစံပြရှိသည်နိုင်သင်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ဖြုန်းရက်အနည်းငယ်နှင့်အတူ။ အစအဦး၌၊သင်အလိုပြုမူသူတစ်ဦးပျော်စရာကောင်းသည်၊ဒါပေမယ့်မသိပ်ပျော်စရာ။ အဘယ်ကြောင့်သင်တိုက်ချင်သောကြောင့်လည်းအများကြီးအဘယ်အရာကိုသင်ဖို့ဟန်ချင်၊ပိုပြီးတစ်ခုခုထက်နှစ်ရက်စွဲများ။ ချိန်းတွေ့ခြင်းခက်ခဲသည်၊ဒါပေမယ့်ပင်ခက်ခဲကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူရှိတယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးဆိုတာသိချင်ကြပြီး၊ပျက်။ ဒီပို့ရောထွေးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်၎င်းပင်ကြီးကိုဖို့ပိုပြီးလူအတော်များများအဘယ်သူသည်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ကဲ့သို့ ကြက်ချိန်းတွေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ ဒီအဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုပြီးလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တစ်ခုခုရှိချင်မှယူမှလာမည့်အဆင့်အထိ။ အဘယ်သူမျှမအုပ်ချုပ်သောသင်ရက်စွဲသင်အလိုမဟုတ်လျှင်နေ့စွဲဖို့တစ်ခုခုအနက်၊သို့သော်၊ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲမျိုးကိုသင်ချိန်းတွေ့ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်၊သငျသညျမတော်တဆခဲအချို့ယောက်ျားတွေကဆင်းထိုဥယျာဉ်ကိုလမ်းကြောင်းအခါမသိရပါဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်။ နောက်သူသိရတာက သူမထင်သင်အမှန်တကယ်သူ့ကိုကြိုက်ချင်တယ်တစ်ခုခုအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစား၊သူတို့ထိုသို့ပြုပြီးနောက်နှစ်ဖြစ်သည်။ အမ်ိဳးအတော်လေးစာသားအတိုင်း။ လျှင်သူလှည့်ဝိုက်သောအားဖြင့်သူကဖြစ်ချင်ယူ၊သူလိမ့်မည်များအပြားရက်စွဲများနှင့်သူပျော်စရာရှိသည်၊သူသည်သူတို့ကိုကုသ။ အပိုင်း-လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်မည်၊အလုပ်ရုံများ၊ဒါပေမယ့်သာမန်သူတစ်ဦးသည်လူအကြားတစ်ဦးကအမျိုးသမီးဆိုသူမပဲလိုပျော်စရာရှိသည်၊သူသည်နားထောင်မည်သို့သင်ကဲ့သို့ရှည်လျားသင်မင်းများထဲမှတစ်ခုနှင့်အပေးဖက်အခွင့်အလမ်း။ ၏အစိတ်အပိုင်းငါ့ကိုခံစားရလျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်အနှောက်အယှက်သည့်အခါ၊သင်ထင်ချင်မှသိကြ၏အရောင်သင့်ခံသင့်ထက်ပိုချင်၊သင်သိလျှင်သင်လိုချင်တာအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနှင့်အချို့သောချိန်းတွေ့၊ဤဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အလုပ်၏ပမာဏကိုအကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်အမျိုးသားအချိုးကျဖြစ်သင့်သည်အမျိုးချိန်းတွေ့ချင်တယ်။ အားလုံးသင်အမှန်တကယ်ပြုချင်သည်ပျော်ရွှင်စရာများ၊ရက်စွဲများအပေါ်သွား၊ငါမဟုတ်လှည့်မြို့ဇောက်ချရှာဖွေနေများအတွက်အလားအလာ။ ငါသည်အကြည့်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူယောက်ျားတွေသိတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒါပေမယ့်သင်ကရှိသည်ဖို့ဘာကိုဆုံးဖြတ်။ လျှင်သင်ယူချင်ကြပါဘူးအရာတစ်ခုခုလည်းအလေးအနက်၊ဒဏ်ငွေ။ ကိုအပေါ်ထွက်လမ္း၊ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အမည်၏အစောင့်အပေါ်၊တစ်တစ်ခုတည်းအတွက်မြို့မှပျော်စရာရှိသည်နှင့်ရှောင်ရှားတစ်ခုခုကိုအလေးအနက်၊တစ်တစ်ခုတည်းအတွက်မြို့ရှောင်ရှားတာဝန်ဝတ္တရားများ။ ဒီအဖြစ်ပျက်အပေါင်းတို့သည်အချိန်၊သင်သို့ရနိုင်ကောင်းတဲ့အချစ်အလေ့အကျင့်မပြုလျှင်အာရုံစိုက်ဖို့သင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသင့်ရဲ့လူပျိုဘဝနဲ့ဘယ်လောက်သင်ခွင့်ပြုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်ခံရဖို့သို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်အသင်ယောက်ျားတွေတွေ့ဆုံရန်။ တစ်နေရာမဟုတ်အစဉ်အမြဲရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏အဘယျသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်သွားလုပ်နေတဲ့၊ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၊သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အမျိုးအစားလူတစ်ဦး၏သငျသညျမကြာသေးမီကတွေ့အရပ်တို့ကိုမသင်သွားပြောင်းနေရာ။ ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတွေ့ဆုံရန်လူတို့အလုပ်မှာဖြစ်၊ငါလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အခြားစာဖတ်သူတွေသိရန်မဖြစ်အရေးပါသူတို့နှင့်မှတိုက်ရိုက် အိမ်မှာ။ မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့နှင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်လက္ခဏာများမှာပျော်စရာနှင့်အနိုင်ပေးအမြန်ပြုပြင်အပေါ်အထီးအာရုံစိုက်။ သတိထားပါ၊စဉ်းစားအတွက်အပူနှင့်အတူသူတို့အဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်၊ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းတောင်းဆိုမှုများနှင့်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်အပေါ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်။ အစည်းအဝေးအကြောင်းလူတွေကိုသူတို့ဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားအမြဲအကောင်းဖြစ်ပါသည်သင်ပြီးသားရှိသည်ကြောင့်ဘုံမြေပြင်၊ဒါပေမယ့်ပင်ပိုအရေးစောင့်ကြည့်နေတာပါလျှင်သင်အလားအလာမိတ်ဖက်။ အနုပညာပြခန်း၊ ၦာန္ေ၊စပျစ်ရည်ကိုအရသာ၊ညနေအတန်း၊အထက်တန်းကျောင်း(သင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ပြေနောက်မှ)၊ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်(ရှာဖွေနေမဲ့၊အမြိုးသားသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်ခန်းမ၌ယောက်ျားအများကြီးအပြေးနေကြတယ်ပတ်ပတ်လည်)၊ချေးခွေးရှိသည်မပြုလျှင်၊နှင့်ပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အချို့သောအားကစား။ ငါကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ဘူးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏၊မခွဲခြားဘဲအသက်အရွယ်ရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊ပိုပြီးမုသာနှင့်ယောက်ျားသူဖြစ်ဟန်သာအခါ၊သင်အမှန်တကယ်တစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက် ။ သင်တို့အဘို့အစုံလင်တို့သည်ဤညစာကိုအပိုင်းပိုင်းကောင်း၊စားနပ်ရိက္ခာ၊ဝိုင်၊လူတစ်စုအဘယ်သူဖြစ်နိုင်အေးခဲနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အကြံဥာဏ်ကိုသင်ဖို့ဘာလိုချင်ထွက်ရှာတွေ့။ ကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များအညီ၊သင်ဘာလိုချင်အတူ၊ထိုအခါအကြောင်းစဉ်းစားအဘယ်သို့အဲဒီလူတွေလိုချင်မှသင်တဲ့စွမ်းအင်ကို။ ကိုယ့်ကြောင့်တစ်ဦးကောင်လေးလိုသုံးဖြုန်းဖို့တစ်ညမဆိုလိုပါဘူးသူရသွားတယ်။ ထွက်သွား၊ပျော်စရာရှိသည်နှင့်၊သတိထားပါမျှော်လင့်လူတို့ကိုအလားအလာမိတ်ဆွေအခါသင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့တတိယနေ့စွဲ။ ငါတွေ့မြင်နိုင်သည်ဘယ်မှာစာရေးသူထံမှလာ။ အများအားဖြင့်အခါသူကပြန်လည်ရောက်ရှိအဖြစ်ဘွဲ့၊မဖြုန်းချင်ပါစနေနေ့ညတယောက်တည်းအိမ်မှာ၊နှင့်လည်းရှိသည်စေလိုသည်အချို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်၊နှင့်များသောအားဖြင့်သူ၏အရပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကလပ်အသင်း။ ထိုသို့ပြဇာတ်ကောင်းဂီတနှင့်အစုံ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ကိုရှာဖို့မျှော်လင့်သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အနားယူရန်၊ ပျော်စရာရှိနှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများ၊နှင့်အလျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း၊ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပိုဆု။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊ငါနေဆဲတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတကယ်ကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်ငါတိုသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှာအစားအစာနှင့်ဂီတပွဲတော်များ။ ဤသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်။ ငါထင်အဘယ်ကြောင့်နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်အခက်ခဲငါတို့အဘို့အချိန်းတွေ့ဖို့ကောင်းသောယောက်ျားတွေဒါမှမဟုတ်ပင်လျော့နည်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အကြောင်းအကျွံအချိန်ဖြုန်းနှင့်အပေါ်အာရုံစိုက်။ ညံ့ေအာင္ကို၊နှင့်အမျိုးသားများခံစားနိုင်ပါမှတစ်မိုင်ကွာဝေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခါကြားလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်အဘို့ရှာသောသူအလွန်ကြီးစွာသောမိတ်ဖက်လျှင်၊သင်ကပင်မျှော်လင့်? အများစုကစုံတွဲများအတူတူလာသောအခါသူတို့ကတိပြုဖယ်ရှားဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ငါစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးအရာလုပ်ဖို့တဲ့အခါတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာ၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်နှင့်အဘယ်သို့ထံမှသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သွားနှင့်ပျော်မွေ့အရာကိုသင်ပျော်ရွှင်စေသည်။ နှင့်အဘို့တစ်ချိန်ကပျော်မွေ့နေကြတယ်ဆိုတာ အထီးကျန်ဆန်။ ကြ်န္ေတာ္တိုလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးပိုပြီးရက်ပေါင်းထက်ပိုတစ်ခုတည်း၊ဒါကြောင့်ခံစားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်။ အဖြစ်အဘို့အချိန်းတွေ့၊ယောက်ျားလေးများ၊ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်ကြောင်းကိုသင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရည်အသွေးအဘို့ရှာကြသည်တစ်ဦးသည်လူအဖြစ်အထွေထွေအာရုံစိုက်။ ငါအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမားတဲ့စာရင်း၊ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားနေတာကအမှုလုံးဝမဟုတ်-။ ဒီဘက်ပါ၊သငျသညျအဘယျသို့သိသင့်အဘို့အရှာဖွေနေနှင့်နေ့စွဲတွေအများကြီးပိုပြီးသင့်လျော်သောအမျိုးသားများအဘို့။ ဒါဟာအစဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောလူအဖို့ဆွဲဆောင်မှုသင်သည်သင်၏စံပြမိတ်ဖက်။ ဒါကြောင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ခဲ့သောသူအပေါ်သစ္စာ၊လူနာနှင့်အမျိုးအစား၊ထိုအခါသင်ရှိသည်လိမ့်မည်အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။ ကောင်းပြီ၊ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ငါသေချာမဟုတ်ခဲ့ဘယ်မှာသို့မဟုတ်ဘာကပါဝင်ပတ်သက်၊ဒါပေမယ့်ဒီအလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေးသူပဲငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌၊ချစ်ငါ့ကလေးတွေဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်။ သူရဲ့အ ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ကောင်းစွာပြီး၊ပျော်စရာ၊လွယ်ကူသော၊ကြီးမားမိသားစု၊လူ၊ရကဒီလို ဒါဟာပျော်စရာင့်ရပြီးပြည့်စုံသောအဖော်၊ပုံစံ၊နှင့်ခင်ပွန်းက၊ဒါပေမဲ့သူရဲ့အနည်းငယ်အဝလွန်ခြင်း၊နှင့်ကျွန်တော်မသေချာလျှင်ငါဆွဲဆောင်နိုင်သူနှင့်လိင်။ ငါပြောကိုမုန်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့များကဲ့သို့ငါခံစားမိပိုင်မှာသူ၏တုိက္ခန္း၊ဒါပေမယ့်ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့၊အမျိုးသမီးအများစုဖြစ်ချင်ဆွဲဆောင်ဖို့သူ့ကိုပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ ငါရက်စွဲအမှားကိုကောင်လေးအပေါင်းတို့သည်ငါ့အသက်ကို၊ကျွန်မအခုကလေးတွေအတွက်မှားပါဘူး။ ချင်ကြပါဘူးအသက်ရှင်သွားကြဖို့။ ငါလက်ရှိတွင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အ -သင်မူကားဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဘယ်သို့ပြုရမည်။ ငါပြုချင်ကြပါဘူးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်ငါ၏အရည်းစားအခုအချိန်မှာ၊ငါမူကားမသိလျှင်ငါသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်ချင်မှရနိုင်။ ငါပဲသိချင်လျှင်မည်သူမဆိုထင်ကြရန်ဆွဲဆောင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတြရွိတယ္၊အချိန်ပို။ ငါအံ့ဩခဲ့ကြရတယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်အချင်းချင်းမကြာခဏ၊ဒီတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိလျှင်မည်ဖြစ်နေ့တိုင်းလျှင်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားပါတယ်၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်။ အဆိုပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလက်ဆောင် ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤဖော်ပြအတွက် သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အစည်းအဝေးလူမျိုးနှင့်ကြွသွားရန်အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်ရုံများစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳထိပ်တန်းကစားတဲ့အခမဲ့ချက်တင်ဆိုဒ်များတစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်မှာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖုအဖုဆိုဒ်များအွန်လိုင်း။ ကျနော်တို့ကပှ အင်တာနက်ရှာတွေ့မှလူကြိုက်အများဆုံးကျပန်းချက်တင်နှင့်အဆောင်အတူတူသူတို့အားလုံးကိုသင်တို့အဘို့အတစ်နေရာတည်းတွင်။ ယခုသင်ခံစားနိုင်ဖုအဖုဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းအားလုံးအပေါ်တူညီသောဆိုက်။ ထိပ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုတင်ပြနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအကြားချက်တင်ဆိုဒ်များရန်ကမ်းလှမ်းဗီဒီယိုစကားပြောနိုင်စွမ်း။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်သောချိန်းတွေ့၊ဒါဟာလိုအပ်သည့်အတွက်သင်ဖို့ကပေးရဖို့လိုအပ်တဲ့အာရုံစိုက်လိုအပ်ပါသည်။ အကြားအဓိကကွာခြားချက်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အစစ်အမှန်အသက်ရှင်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအားလုံးတို့၏လှုပ်ရှားမှုများချိန်းတွေ့နေရာယူအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထိပ်တန်းများ၏စာရင်းချက်တင်ဆိုဒ်များအကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များများအတွက်လွယ်ကူစေသည်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုချင်တဲ့သူများလူမျိုး၏ဖြည့်ဆည်းဖို့အခြားလူများနှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းလည်းကောင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊သို့မဟုတ်လူမှုရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဘို့သို့မဟုတ်ရပ္တည္ဖို။ မျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူချက်တင်ဆိုက်ထွန်းအွန်လိုင်းယနေ့အချိန်တွင်၊အပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အတွဲတူသူတွေကိုကမ်းလှမ်းတာအကောင်းဆုံးချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များ။ သငျသညျဆိုပါက အလေးအနက်ကိုရှာဖွေအထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့စာရင်းသင့်ကွန်ယက်၏၊ထိုအခါသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အားနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်ဆန်းထိပ်ချက်တင်ဆိုဒ်များအတွက်ဒီနေရာမှာ။ တိုင်းစကားပြောဆိုက်ဒီနေရာမှာစာရင်းသွင်းသည်အဖြစ်အတွင်းတိမ်အနက်အတွက်၊တစ်ဦးကောင်းစွာအသေးစိတ်အချက်ကိုထည့်သွင်းစီကိုသင်နားလည်ကူညီသူတို့ကိုပိုကောင်း။ ကြည့်ယူငါတို့၏ထိပ်တန်းချက်တင်ဆိုဒ်များပင်ဖြစ်လှော။ မည်သူမဆိုများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီးတစ်ချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသည်နိုင်ကပြည့်စုံ။ အချက်တင်ဆိုဒ်များဒီမှာစာရင်းရှိပါတယ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်ကမ်ကြောင်းကိုလွယ်ကူစေမည်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ထိုသို့မဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ဖို့သင်တို့အဘို့အသွားကနေဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုက်မှအခြားနိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအခမဲ့ချက်တင်ဆိုဒ်များ။ ကျနော်တို့ယူကြပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်စမ်းသပ်ဖို့အသီးအသီး၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီပလိုတည်ပြုဖို့သောသင်တို့အသီးအသီး၏ဤအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များမျှတို့တွင်အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များ။ အများစုမှာထိပ်တန်းချက်တင်ဆိုဒ်များစာရင်းမှာနေစေခြင်းငှါ၊အများအတွက် လာရန်နှစ်၊အချို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ၏အတွေ့ကောင်းချက်တင်ဆိုဒ်များကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ၊ကျနော်တို့သူတို့နှင့်အတူအစားထိုးအဆိုးဆုံးတယောက်ပါ။ နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းများသည်သုံးသပ်ရေး၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်နောက်ဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များနိုင်ရန်အတွက်သင်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်။ ထည့်သွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စာရင်းဖို့ကိဳက္ရာကြောင်းသေချာစေရန်လိမ့်မည်သောကိုင်ပြီးနှင့်အချိန်မရွေးကောင်းမွန်ရန်ဆန္ဒရှိပြီးကတည်းကအားလုံးအခက်ခဲအစိတ်အပိုင်းများ၏ဒီဂိမ်းအဖြစ်ခဲ့၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူသပ်ရပါဘူးကိုယ့်အလုပ်ကတစ်ဝါသနာအလိုက်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ဆိုဒ်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှသူတို့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သူတို့ကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးနှင့်လည်းရချင်ပြီ။။။။။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းများသည်အများအားဖြင့်မှတဆင့်ဝင်၏အင်္ဂါရပ်များကိုတစ်ချက်တင်ဆိုက်နှင့်စမ်းသပ်ပြေးနိုင်ရန်အတွက်အနိုင်ပေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးနှင့်ဖြောင့်မတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်မည်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာ။ ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ဦးကောင်းစွာအသေးစိတ်အချက်တင်ဆိုဒ်များပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊သင်ကြားရှေးခယျြနိုငျကိုမဆိုအရန်သောဆိုဒ်များအသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ခံရမပါဘဲပူ။ ယူ သင့်ရဲ့အချိန်မှတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်အကြားရွေးချယ်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းချက်တင်ဆိုက်သင်တို့အကိုက်ညီဆုံး။ အဖြစ်ဖော်တိုးတက်မှုများအတွက်၊သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ရေတွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအခါတိုင်းကျနော်တို့ဆင်းဖြေရှင်းပေါ်ချက်တင်ဆိုဒ်များအပေါ်နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း။ ကျွန်တော်တို့လေးမြတ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်လျှင်သင်ပေးနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏အရိုးသားတဲ့အမြင်ကဆိုချက်တင်ဆိုက်ကိုဒီမှာပါစာရင်းသွင်း။ လည်းကောင်းရေးသားပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါတယ်၊ဆိုက်၏အလိုရှိသောအမွတ္ေသို့မဟုတ်ပင်ပြီးဆက်သွယ်ပေးစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်။
ဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်ခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ်၊နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကြံပြုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆက်ဆံရေးနှင့်အများအားဖြင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌အနီးကပ်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေး။ တစ်ခါတစ်ရံဆက်ဆံရေးကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်သိသာသည်၊ဘေးဒဏ်သင့်မည်ဖြစ်ရှက်သို့မဟုတ်မရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး။ တခါတရံမှာ၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာနောက်မှာကွယ်ဝှက်ရှင်းတမ်းကဲ့သို့သောအဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးမည်သူမဆိုပျော်ရွှင်ဖို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုပဲရှိသေးမပြတက်သေး၊သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအသားယူ။ သူလိုက္ရင္လည္းအတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေး၊ဥပမာအားဖြင့်၊အလွန်ကြီးစွာသောတာဝန်သာ၊အညံ့၏၊သူ၏အလိုဆန္ဒနှင့်လိုအပ်၊အဆုံး၏လွတ်လပ်ခွင့်၊အလင္းျပင္မွ၊ဒဏ်ရာ၊နှင့်ခံစားချက်၏အပြစ်။ အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၊ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်များစွာသောအခြားလူများကဲ့သို့ အန္တရာယ်၏အမြင်၊မကြာခဏ၎င်း၏အမြစ်များအတွက်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်ပင်အတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမိတ်ဖက်။ ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူမိဘများသို့မဟုတ်အခြားကိုးကားပုဂ္ဂိုလ်တဦးသိကလေးဘဝအတွက်။ ဒါကြောင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အရင်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်သင်အဆုံးမှသို့မဟုတ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၊အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကငယ်၏အကြောင်းကိုစိုးရိမ်လူမျိုးအပေါ်။ စတဲ့မကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်သူတို့၏မိဘများ၊အများကြီးခဲ့သည်၊သို့မဟုတ်ကိုယ်မိဘတစ်ဦး၏ဖြတ်သန်းခြာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်၏ဆက်ဆံရေးကိုကြောက်နှင့်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်:အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းဆက်ဆံရေးထက်နာကျင်မှု၏ငြင်းပယ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု၏။ သူရဲ့အကြောက်၏ဆက်ဆံရေးကို၊အကြိုးစားပါလိမ့်မည်အရာအားလုံး၊ခံစားမျှမကြောက်ရွံ့။ ကျယ်ပြန့်၊ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်သင့်လျော်သောမဟာဗျူဆန့်ကျင်ပူပန်ရှောင်ရှားကြသည်၊ဥပမာအားဖြင့်၊လွတ်မြောက်။ အခြားအ အခြားလူများမူကား၊ခံစားရရန်စတင်ရှိသမျှကိုပိုမိုမသက်မသာ၊အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးသည်။ေအတွဲဖော်ဒီသည်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်သောကြောင့်၊ဤခံစားရကြောင့်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အပြုအမူများထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခြာမီဦးခေါင်းကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမည်သူမဆိုသည်ဆင်းရဲမှဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်ခြင်း၊တွင်မိတ်ဖက်အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသာအခါသူသတိပြုမိဖြစ်လာ၏သူ၏အန္တရာယ်အပြုအမူတွေရဲ့နှင့်သတိရှိရှိ၊တာဝန်ပျက်ကွက်မှု၎င်း၏မိတ်ဖက်ကျော်ကြာ၊သူသင်ယူနိုင်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အကူအညီဖြင့်တစ်ဦးကုထုံးကျော်လွှားရန်ဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်စမ်းသပ်ပြသပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိသင်ပိုင်ကိုလူအများရှောင်ရှားမသိအနီးကပ်ပူးပေါင်းသောကြောင့်၊သူတို့ကြောက်နေကြတယ်ဎသူ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ငါ့ကိုသင်၏အချိန်။အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ပွင့်လင်းအနားများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အခြားသူများ။ ထိုကွောငျ့၊ငါ့စိတ်နှလုံးခဲ့လိုရှိသောအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ ။ အဘယ်သို့ငါအထူးသဖြင့်ရှိကြကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအတူပိုကောင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အခြားသူများအရတလျှောက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်။ ဤသည်မှာလည်းအဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ငါ၏ အကြံပေး။ တစ်ဦးကချိန်ခွင်လျှာကိုငါ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွေ့နံနက်တရား၊ဒစ်လမ်းလျှောက်လာပါတယ္ နှင့်မုန့်ဖုတ်အရသာ။ ဟိုင်း၊ကျွန်မ၏နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ဇနီး။ ကွဲကွာ။ ငါသည်သာကိုယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့၊နှင့်ဘာမှအတွက်ဘုံမှလွဲနှစ်ဦးအံ့ဩဘွယ်သောသားသမီးနဲ။ အခုတော့၊ပြီးနောက်လအတွင်း၊ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လး။ ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး၊ငါ၏ဤခံစားငါသည်အဘယ်သို့လွဲချော်ခဲ့။ အခုသူကြောက်သွားဖို့ထွက်ပေါ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၊သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုလို။။။။။ ထိုပြဿနာကိုတည်ရှိသည်နှင့်အတူသူမ၏အတိတ်အတွက်။ သူမသည်နေဆဲဖြစ်ပါသည်၊စက္ကူပေါ်မှာသာ။ သူမလျစ်လျူရှုသူမ၏ခင်ပွန်းအားဖြင့်။ ထိုအခါသူမနှင့်တွေ့ဆုံအလူ၊အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်း၊ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်အချိန်တိုလာဖို့သူ၏ဇနီးနှင့်အတူငယ်။ ယခု၊ကျွန်တော်လေ့လာသိရှိပြီးအကြောက်အတွေ့အကြုံအတူတူပါပဲ။ ငါဝန်ခံငါ့မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်။ ကျွန်တော်ထင် သင်တာပါ။ အခုသူမရေးသားခဲ့သည်ပြီးနောက်ကျွန်မအမေးသင်မည်သို့သင့်ရဲ့ခံစားချက်များမှာ။ အဖြေခဲ့သည်။ သူမအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်။ ငါ၏ရည်းစားတက်ဖဲ့ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်၏။ ငါအကြောင်းသိသူအများအပြားအဘယ်သူမျှမခံစားချက်များအတွက်အမျိုးသမီးကသူ့ကိုအလွန်ရှည်လျားကိုဝန်ခံဖို့ကျွန်မကိုသူ့ခံစားချက်။ ကတည်းကအလွတ်ကဲ့သို့ခြာရက္သွားကြပြီ။ ကျွန်တော်ကကြောက်ဖို့ဘယ်တော့မှကြားမှသူတို့ကိုနောက်တဖန်အ။ မက်ဆေ့ခ်ျများမှအကြှနျုပျကိုဖွစျလိမျ့မညျ။ ယခင်က၊အရာအားလုံးကောင်းသောခဲ့၊ကျွန်ုပ်တို့သည်မ ၊ခဲ့သည်နှင့်အလွန်ချစ်။ ငါမလိုချင်ကြဘူးသူ့ကိုအာရုံကြော၊ဒါပေမယ့်လည်းအပြီးရေးသားဖို့နောက်တဖန်အ-ကဖ်က္ဆီးငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်သူသိထားရပါတယ္:(ငါကြကုန်အံ့သြဖွယ်ကလေးဘဝ။ အဘယ်သူမျှမခြာ၏မိဘများမရှိ၊အကြမ်းဖက်မှု၊အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ ငါအခဲကြောင့်။ ဒါပေမယ့်ငါခဲငါ့အသက်ကိုအတွက်၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေး။ အခါတိုင်းငါတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း၊ငါများသောအားဖြင့်မှာထားပြီးပထမဦးဆုံး တွေ့ဆုံလုံးဝ'အနှောက်အယှက်'ဖို့ကြိုးစားပြီးတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သူတို့ကို။ လျှင်အချိန်ပိုပြီးမကြာခဏမထက်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်အမည္ကြွလာ၊ငါအတွေ့အနှောက်အယှက်နှင့်အရင္တြဲ။ -ငါအလိုတူအချိန်ဖြုန်းဖို့၊တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါပိုပြီးအချိန်ရှိသည်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါအများကြီးကြည့်မှတူညီသောအပြုအမူငါ၏မိတ်ဆွေ။ အစဉ်မပြတ်ငါခံစားသူအကြှနျုပျကိုစောင့်ရှောက်မှာအကွာအဝေး။ ကျနော်တို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းသောဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးပြီးသားကျွမ်းကျင်အောင်သူထားခဲ့သူပါ။ ထိုအခါမူကားဖြစ်နိုင် ပင်သော်လည်းတစ်ဦးရှိသည်ဖို့အလိုဆန္ဒရှိကလေးများနှင့်မိမိအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်။ ကၽြန္ုပ္၏ဒါဝမ်း:(ငါကူညီနိုင်။ ငါကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရန်အကောင်းဆုံး။ မကြာသေးမီက၊ငါကငါစိုးရိမ်၏။ ငါမချစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအကြှနျုပျနှငျ့အတူရှိနီးပါးများအတွက်အနှစ်။ နူးညံ့များမှာအဆန်းဖြစ်တာပေါ့၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသူတို့ထံမှလာ။ ကျွန်မချက်ချင်းစိတ်မသက်မသာနဲ့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးသင့်တုံ့ပြန်။ အတူအခြားလူတယောက်တည်းပြေးဖို့ အစပျိုးအတွက်ငါ့ကိုအရူးမြော်လင့်၏။ အဘယ်အရာကိုရင်မကိုင်ဘားထိပ်မှာ။ မကောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးဘာမှမဆန္ဒရှိသည်ထက်ရင်းနှီးသောစိတ်ခံစားမှုဆက်ဆံရေးဟာအခြားလူများ။ အားလုံးအမှုအရာအကြောင်း၊ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့နေသောအလိုဆန္ဒအကြှနျုပျနှလုံးသ၏။.
အရင်းချော်ရည်သည်ဘလော့ဂ်အကြောင်းလူငယ်တစ်ဦး၊အမျိုးသမီး တစ်မိန်းကလေးအကြောင်းပြောပုံကိုယတှငျနထေို။ ပျော်ရွှင်တရုတ်ချစ်သူများရဲ့နေ့၊ကိုယ့်အနည်းငယ်သဘောနှင့်ပျော်စရာစကားဝိုင်းအကြောင်းကိုဖွင့်အဘယျသို့ကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ရှန်ဟိုင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပြည်နှင့်ဒေသခံများရောနှော။ တရုတ်မိန်းကလေးများချစ်င္ငံျခားသားမ်ား။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ၊ငါသည်အင်တာဗျူးနှင့်အတူငါ့မိတ်ဆွေအမည်ရှိ ကနေတရုတ်နိုင်ငံ။ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာအကြောင်းသည်အဘယ်အရာကိုချိန်းတွေ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ နောက်ကျောမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ယခုယူမကိုနှလုံးအရာအားလုံးရှိသည်ဟုဒီဗီဒီယိုထဲမှာ။ ဒီဗီဒီယိုကိုသင့်မထြက္ဘူးေခ်ြးစက္။။။။။။ ပဲပျော်စရာရှိကြောင်းပြောနေတာငါ့အတွေ့အကြုံ။ ဘာလူမျိုးတရုတ်တစ်ယောက်အကြောင်းတွေးလိုက်တရုတ်တဲ့သူမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံင္ငံျခားဝန္ေဆာင္မႈအားအဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကို၏အစိတ်အပိုင်းအ မိသားစု။ လွဴဒါန္းပံ့ပိုးရုပ်သံလိုင်းအဘယ်သူမျှမ။ အဘယ်ကြောင့်အားလုံးတရုတ်လူမျိုး၊ဤစားရန်ကြိုးစားနှင့်လှပသောဘောလုံး? တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ဤအတွက်။ လာနှင့်ထွက်ရှာပါ။ တရုတ်လပ်ရက်အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ ကျနော့်မိတ်ဆွေကတစ်ခုဆောင်းပါးမှာကပြောပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တရုတ်ယောက်ျားလေးရှားပါးပါတယ် သူတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းလက်ထပ်သည်။ ငါဒါကြောင့်အမျက်ထွက်သောငါမျှဝေ၊သင်နှင့်အတူ။ မူရင်း။ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့အကြောင်းပြောအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်ကြောင်းကိုသိရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်-ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံေ။ ဝန္ေဆာင္မႈ၊တူနှင့်မှတ်ချက်အရအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို။ တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်သူတို့ကိုအကုန်အထိတစ်နှစ်အတွက်။ ပေါ်မှာငါ့နောက်သို့လိုက်:ရှန်ဟိုင်းကိုယ္ထိချိန်းတွေ့၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါပေမယ့်နေဆဲ။ သို့သော်လည်းငါသည်မမသိဘူး။ သူကဘာလုပ်တယ်များအတွက်။ သူမအရာအားလုံးကိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်းချိန်းတွေ့အကြောင်းတရုတ်အမျိုးသမီးအတွက်မိနစ်။ အာရုံစူးစိုက်မှု:ဒီ ။ ဒီနေရာမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြံပေးချက်များသင်ကူညီရန်အတွက်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ နည်း။ မှတ်ချက်။ ဝန္ေဆာင္မႈစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့"ငါ့အရင်ဗီဒီယိုများ"။ ရီ။။။။ တိုက်ပွဲတွေနှင့်အားသာချက်များချိန်းတွေ့သောဘာသာစကားအတွက်အသင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကား။ ငါ့အတွေ့အကြုံအလယ်၌။:ထိန်မှတ်ချက်နှင့်အတူ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ၊ငါသည်သင်ပြောပြပါ့မယ်၊အကြောင်းငါးပါးတို့ကိုငါမေပ်ာ္တဲ့အခါငါတွေ့တရုတ်ယောက်ျားလေး။ အကောင်းဆုံး သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်လမ်းညွှန် ကြည့်ရည်းစားများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အင်း။ ရေချိုးခန်းအက္ပ္ကိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့သို့မဟုတ်အသံစကားပြောဆိုချက်တွေကိုကျပန်း၏။ ဒါဟာယာက္ကိုပျော်စရာ၊ဒါကြောင့်ကျွန်မကြိုးစားခဲ့တယ်။ ရှာဖွေနေချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိတ်အနက်ရောင်အတွက်တရုတ်ပြည်ပမှာနေထိုင်နေနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပြည်ပအမှုအရာအဘယ်သူမျှမအပြောနှင့်ပတ်သက်။ ကြိုးစားဘွတ်တစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်။ နောက်ပြီးဂီရာကငါ့အတွက်ဘဝအသက်တာ၊တရုတ်ကျောင်းမှာဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၊တရုတ်အကြံပေးချက်များနှင့်အထွေထွေအမှုအရာယ့္ျချင်တယ်ဆိုရင်မြည်သံဂီ။ အဘယ်သို့မှားယွင်းနေသည်နှင့်အတူအနက်ရောင်အမျိုးသမီးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ? ဒီအစိတ်အပိုင်းများ၏လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ။ ကျေးဇူးပြု၊ကြှနျုပျတို့။
ဘောလုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းနှင့်ကနေဒါဖြစ်လာကြပါပြီသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝစွာမျှော်မှန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခွက်ဖလားကို။ အဖြစ်တတိယတက်ကြွသောဘောလုံးသမား၊အနှစ်အရွယ်အမေရိကန် လွိုက်ဂိမ်းအတွက်ဆန့်ကျင်မက္ကနိုင်ခဲ့ပါပြီကွဲအမှတ်အသားများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပန်းတိုင်။ ဂျာမန်ဘောလုံးအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်မရိုးရှင်းသော:အဖလားရွေးချယ်ခြင်းအမျိုးသားနည်းပြ၊ ဂျုံးစ်မကြီးမှဘာသာရပ်ကန်-ချွတ်ဖို့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊အနိုင်နိုင်။ စိန်ခေါ်မှုကိုများအတွက်ကစားသမားတွေ၊စမ်းသပ်မှုများအတွက်ဖက်ဒရယ်နည်းပြ: ဂျုံးစ်၊အဆိုပါဂျာမန်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအသင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်သောကြာနေ့နှင့်အတူကြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အသစ်ထုတ်ပြန်ဖို့အဘောလုံးပြိုင်ပွဲ။ အမေရိကန်ဘောလုံးအသင်း အသစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ယခင်လို့စ်ဒုတိယရွေးချယ်ခဲ့သည်ထံမှပုံမှန်မဟုတ်သောအကြီးလယ်ပြင်၌လျှောက်ထား၏အဆက်အပြောင်း ţ။
နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှု။ ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အများကြီးတွေ့လူသစ်-စကားပြောခန်းကိုကမ်းလှမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကြောင်းအရာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ၊တာဝန်ခံအခမဲ့၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလူသစ်နှင့်အတူ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အလိုအသုံးပြုသူအမည်နှင့်သင်ချက်ချင်းစကားပြောရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူအခြားလူများ။ အခြားရွေးချယ်စရာဂြိုဟ် ချက်တင်အခမဲ့လမ်း အဘို့အချိတ်ဆက်နဲ့အတူထောင်ပေါင်းများစွာ၏အစိတ်အမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာ၏ကမ်။ နှင့်လိင်ချိန်းတွေ့၊အက်ၤီနဲ့သတိ-ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်ရန်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူများဆက်သွယ်ပြောဆိုဒါသင့္သူငုိတူ၊အထက်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုအစဉ်အလာချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအများ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်တင်။ ဒီနှင့်အတူရွေးချယ်စရာသင်သည်တတ်နိုင်နှာအစဉ်အမြဲအဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မှာရှိတည်းခိုနှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ပြု။ တည်ထောင်ခဲ့သည်အားဖြင့်ရုရှား၊။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ၊အစိမ်း၊လူအသီးအသီးအခြားဆက်သွယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ဒီမှာရေမတွက်နိုင်သောတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုချက်တင်နှင့်အတူ၊သငျသညျထငျမှအစားထိုးခံရ။ သင်အတွေ့အကြုံအတူတူလွတ်လပ်ခွင့်၏ခံစားချက်နှင့်စွန့်စားမှုနှင့်စရာမလိုပင်မှအိမျတျောကိုစွန့်ခွာ။ ကျပန်းအသိအကျွမ်းအောင်ကမ်ပေါ်တွင် ။ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအသုံးပြုသူများ။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလက္ခဏာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သင့်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပြတ် ယောက်ျားတွေ။ အတူတကွ၊ပျော်စရာ၊အမြိုးမြိုးနဲ့ဆှ။ ကံမကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်အကြောင်းဒါကြောင့်အတွက်ငြိမ်းချမ်းသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်တစ်ခါတစ်ရံခက်ပါတယ်၊အမှန်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနစ္သာအခန်းကဏ္ဍမှတစ်ခုလျှင်အတော်စကားပြောမိတ်ဖက်တည်းကသီးသန့်တွေ့ဆုံလိင်ဖန္တီးပေါ်ပေါက်အားလုံးအတွက်အလွှာလူဦးေရ၏၊အလွန်ခေတ်မီပြီးလက်ခံခြင်း၏နည်းလမ်းအသွယ်နှင့်အတူအခြားလူများ။
သူမထင်နောက်တဖန်အသူမလိုအရှက်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ယူဆချက်တွေကချိန်းတွေ့၊နှင့်ယူမှသူ့ကိုသူ့မိဘများက၊အကိုတို့။ ဤဖြစ်ရပ်သည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဖို့သူမ၏၊ငါသည်ချိန်းတွေ့ကြပါဘူး၊ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ထက်စကားပြောဆိုရန်ရှင်းလင်းသောတရုတ်စကားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးကပေးထားသောသင့်ဇာတိမြို့လံုး(လက်အောက်ငယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာဘေဂျင်း၊ရှန်ဟိုင်း၊ကွမ်ကျိုး၊)၊သင်ဖြစ်နိုင်များမှာအောက်ခိုင်ခံ့သောဖိအားလက်ထပ်ဖို့။ ပြီးရင်ချင်ကြပါဘူးအဖြစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အခုအချိန်မှာ၊သင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၊သင်အေးဆေးတည်ငြိမ်၏မိဘများဆင်းအားဖြင့်စိတ်ပျက်။ သူမဖိတ်ခေါ်ဖို့သင်သူမ၏နေအိမ်ကိုအထင်အကြောင်းအကောင်းနဲ့အလျောက်ပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပြည်ပ လူငယ်တစ်ဦးသည်လူနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောအနာဂတ်။ ဒီဘက်ပါ၊သင့်ရဲ့မိဘများတစ်ဦးတည်းကိုသင်ချန်ထားသည်။ သူတို့မနိုင်အမှန်တကယ်ထွက်သွား၊သူ့ကိုပြောပြသောသူကဲ့သို့ပြုမူသင့်မိတ်ဆွေအဘယ်သူသိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ နှင့်အမှန်တကယ်ခံစားရလိုသူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အငြိုးကြောင့်ခဲ့ခြယ်လှယ်(သို့သော်၊အနည်းငယ်ဝန်၊အဆိုပါသဘောထား၏လူငယ္မ်ားကိုမိမိတို့အဆွေခင်ပွန်း၏ရှေ့မှောက်၌သူတို့၏မိဘများသည်အမှန်တကယ်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပွုနိုငျကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ကျွန်တော်မသေချာသောမိန်းကလေးများအမှန်တကယ်အသုံးပွုသောယောက်ျားတွေများအတွက်၊ဒါပေမယ့်သေချာပါတယ်သောအချို့သောမိန်းကလေးများအိပ်နေသောသူ၏မိဘများကသင်၏အထီးမိတ်ဆွေ၊ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မိဘတွေရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်သင်အနှောက်အယှက်မှလက်ထပ်ခြင်းသူတို့နှင့်အ)အတူအပြင်သူငယ်ချင်းများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကာ၎င်းတို့နေအိမ်သင်သိသောအခါ(သို့မဟုတ်မသိဘူး)သင်ဖြစ်နိုင်မှုကိုချွတ်ပြချင်တယ်ဘယ်လိုကောင်းတစ်ခုမိတ်ဆွေဖွဲ့အကြီးမြို့၊သင်ရုံပြချင်သင်ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူ။ အဖြစ်မိသားစု၊ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့မိဘများအလွန်ကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်တစ်ခု၏ညစာစားပွဲမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအရေးနှင့်ပိုပြီးဘာမှမ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ယူ၊ယူပြီး၊အောင်သူငယ်ချင်းများ၊အစည်းအဝေးနှင့်အတူမိဘများသည်အလွန်လေးနက်သောအရာ။ ကချင်ဆိုလိုသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘများကိုလက်ခံနိုင်၊ကျွန်မခင်ပွန်း၊ငါ့မယား။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရည်းစားလေးအနက်နှင့်သင်ချစ်သောသူနှင့်သူမ၏။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ကြောင့်လက်ခံရန်။ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပြောဆိုရန်၊သူမ၏သူမ၏ပြောပြသောအမှန်တရားနှင့်ရပ်တန့်ကစား !။ သူသည်သင်တို့ကိုယူမှသူမ၏အမေဖြစ်၊မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖြစ်သူမ၏ရည်းစား? လျှင်ဤသည်ပထမတစ်ခုကတော့၊ဟုတ်ကဲ့၊ထိုသို့ဖြစ်ရမည်။ ဒါပေမယ့်သင်တို့ကိုစုံစမ်းပြီသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းတွေက? ဤသင်အားငါပေးမည်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်အဖြေထက်အချို့မှာဧည့်ဗီဒီယိုရက်စွဲများ။ သင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်ရဲ့အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်ကိုယ့်စတစ်ဆက်ဆံရေး၊ထိုသို့အစောလွန်းအတွက်တရုတ်မိန်းကလေးဖျော်ဖြေဖို့လာဆောင်မှာ၏အိုင်ဒီယာနဲ့လက်ထပ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အမှုအရာပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အနှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ ညစာအတူသင့်မိဘများမရှိတော့တဲ့အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဆက်ဆံရေးအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့(ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့သောကျေးလက်ဒေသများ၊ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေမအတွက်ေကျးလက်ေဒသ အမြို့မြို့၊အထူးသဖြင့်အတူနိုင်ငံခြားချစ်သူ)။ အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပျက်ရန်မိန်းကလေးများ၏ဦးခေါင်းသည်လုံးဝဖြင့်ဖုံးလွှမ်း ဗန်၊ဒါကြောင့်မပြန်လုပ်ပါ။ သို့သော်၊လျှင်သင်အယူငါ့အကြံဥာဏ်၊ငါသည်သင်ပြောပြရမည်။ ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊အစားတူကြပါဘူးတဲ့သူကလူ၏ဘာသာစကားကိုပြောဆို။ ဒီတော့ကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်မိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေအပြုံးတိုင်းနီးပါးအချိန်ကိုပြောပါ။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊ဒီအဖြစ်နိုင်အဆိုးဆုံးညစာသင်သည်သင်၏အသက်တာ၊ဒါကြောင့်ကိုပြင်ဆင်ခံရ။ ကျွန်တော်ကတရုတ်၊ဒီတော့လျှင်သင်မေးကြလျှင်ညစာအတူအိမ်မှာနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏မိဘ၊ဆိုလိုကြောင်းသင်စဉ်းစားနေပါတယ်လက်ထပ်။ ဒီပဲညစာအတူသင့်ရဲ့အမေကအဲဒါပဲအမိအလိုအဘယ်အရာကိုမြင်လူတစ်ဦး၏ကြင်နာသူမနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူမ၏သမီးထံမှနာကျင်မှုကို။ သို့သော်၊အများဆုံးတရုတ်မိန်းကလေးများအလွန်အလေးအနက်ထားချိန်းတွေ့ယူ။ ကလွယ်ကူမယ့်ကိုသူမ၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ။ အဖြစ်မကြာမီသင်နိုးထသွားဖို့ညစာအတူသူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်နှင့်အတူသူတို့ကိုထက်ပိုပြီးတာနဲ့၊သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိသူတို့ကိုမြင်ဖြစ်၏။ သေချာ။ သင့်ရည်းစားကဖိတ်ခေါ်သင်တွေ့ဆုံရန်မှသူမ၏မိဘ၊ထိုအခါသူမ၏ရည်းစားမှတရားဝင်တွေ့ဆုံနှင့်သူမ၏မိဘများနှင့်လည်းသင့်မိဘများအားပေးတစ်ဦးအပြုသဘောအသိအမှတ်ပြု။ ဒါဟာအစကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုလူတစ်ဦးသင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလက်ထပ်ဖို့အနာဂတ်မှာ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဆောက်လုပ်ဖို့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ်နှင့်အတူသူမ၏၊ငါအကြံပြုေတြပါ။ ကောင်းပြီ၊သင်ဆဲဘဲဒုတိယအကြံအစည်အကြောင်းကြားဆက်ဆံရေး၊ငါအကြံပြုပြောပြသူမမသေးဖို့အချိန်မြင်ရ။
သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်တစ်ဦးသည်လူသူရှာဖွေနေသည်သူ့ကိုဦးခ်င္းအတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းစျေးကွက်များအတွက်ဆက်ဆံ၏ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်း။ မလွယ်ကူ စိတ်ဝင်စားစရာလိင်ယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊အဖြစ်ခွဲသူရဲ့အကြည့်ကိုသူ့အဘို့အဆက်အသွယ်-ပိုပြီးလိင်မိတ်ဖက်အမျိုးအစားများ။ လိင်ယောက်ျားကိုကြော်ငြာနိုငျအဦးခ်င္းအတွက်လိင်မိတ်ဖက်ရိုးရိုးကြော်ငြာအတွက်လိင်ဘဝလက်တွဲဖော်အခမဲ့။ သာသူကဆက်သွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေနေသည်သူ့ကိုတွေ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်အသက်အဘို့အ။ လိင်အမျိုးသားများအတွက်၊ပိုပြီးလိင်ဆှ-ဒါဟာရေရှည်ပူးပေါင်းရှာဖွေနေတဲ့ကြော်ငြာရန်ကျေးဇူးပြုပြီးသူအဘို့အရှာဖွေနေသူ့ကိုဂုဏ်ေၾကာ္ျ။ ၏သင်တန်း၊အဂၢဦးခ်င္းတင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက်နှင့်အလွန်သတိပညာ။ အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအခွင့်မပေးနေကြတယ်။ တစ်ချက်ထုတ်ဖော်:ဦးခ်င္းအမျိုးအစားများ၊သူရဲ့အကြည့်အတွက်သင်နဲ့သင့်အဘို့အရှာဖွေနေသူ့ကိုမကြာခဏစီး။ နှင့်အတူအင်တာနက်နှင့်အချေအချစ်၊အထူးသဖြင့်ချိန်းတွေ့နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို၊ဗွီဒီယိုအသစ်အသိုင်းအဝိုင်းကြီးမားသောတိုးမြှင့်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်လှည့်ပတ်နေသောပုံတစ်ပုံ လူမျိုးအပေါင်းတို့၏၊တစ်ခုတည်းနှင့်သာရှာ၏။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုမှာ၊လက်တွေ့ကျပြီးအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအပြောင်းအလဲအပေါ်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့သင့်အားအာရုံစိုက်ဖို့ခေါင်းစဉ်၏ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္သူကသူ့ကိုရှာနေနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်သည်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါသင့်မေးခွန်းကိုအ၊သင်သည်အဘယ်သို့ရှာကြသည်အတွက်နှင့်မည်သို့သင်အလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်။ ညီ၊သင်တေ့၏ဓာတ်ပုံနှင့်ရှင်းလင်းစွာသင့်ရဲ့အစဥ္တ။ သူတို့ရှင်းလင်းစွာပြသခင္းအသြင္ကိုေသို့မဟုတ်ပုလ်အမျိုးအစား။ ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ၊သို့သော်၊ကြောင်းဓာတ်ပုံ၏အဆက်အသွယ်ပြသရမည်ကိုပြသသင်၏မျက်နှာနှင့်လည်းအဘို့တတိယပါတီအလိုက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၏သင်တန်း၊သင်သည်သင်၏တင်ပြချက်၊အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊သို့သော်၊လျှင်သင်သာတစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကြော်ငြာတယ်ချိန်းတွေ့သူအဘို့အရှာနေအတွက်သူ့ကိုရှာ၏တစ်စစ်မှန်သောအဖော်၊အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောအသားအရေသာျ။ သင်သည်တိတ်ဆိတ်အတွက်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်သည်၊ဒါပေမယ့်သေချာအောင်နောက်ခံ ကြားနေပြုမူ။ သင်တွေ့ကြပြီအတွက်သင့်လျော်သောနေရာအတွက်၊သင်အသင့်ရှိကြောင်းသိထား၏ရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာအလားအလာမိတ်ဖက်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌။ ညီ၊သင်အသင့်ပြင်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုး၊သို့သော်၊:သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံအဘယ်သူမျှမအမှားတိ။ ၏သင်တန်း၊သင်သေချာပါစေဘယ်တော့မှမနိုင်ပါကြောင်းအမျိုးသားများအကြောင်းမှတ်တမ်းအပေါ်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပြသရန်၊တိုက်ဆိုင်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်အဖြစ်မှန်အတွက်။ အတိုအဝယ်တစ်ကမ်ဈေးတွင်ခွင့်ပြုရန်အဖု။ ပိုပြီးအကြံပေးချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်အပေါ်ဘယ်လိုပုံတူဓာတ်ပုံကဒီမှာ။ ကျွန်တော်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမည့်ပြဿနာ:အဘယ်မျှအတော်များများသောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မျှဝေချင်။ သင်စောင့်ရှောက်သင်ကရေးတဲ့အခါသင့်ရဲ့ကြော်ငြာအတွက်ဦးခေါင်း၊မလိုလားဧည့်သည်များ၊နှင့် လက်လှမ်းရှိသည်ဖို့သင်၏ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္။ ကြခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မမူတည်လာဗီရိုထဲကသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့စက်ဝိုင်းနှင့်မိသားစုအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊သင်ချင်ကြပါဘူး၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံများမှာပျံ့နှံ့အတွက်အသင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီ။ ထို့ကြောင့်၊သူတို့ကမပေးဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအမည်(အီးမေးလ်လိပ်စာ)၊ဒါပေမယ့်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံပိုင္းတည္ေနရာ(မြို့၊တိုင်းဒေသကြီး)နှင့်၎င်းတို့၏ကောင်(အမြင့်တည်ဆောက်၊ဆံပင်အရောင်၊စသည်တို့ကို။)။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အကြံပြုလိုတယ်၊ဝါသနာနဲ့အခြားအလားတူအသေးစိတ်အချက်ကြောင့်၊ပိုပြီးအချက်အလက်များကိုအကြောင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်သွယ်ပြသ၊မြင့်မားတဲ့အခွင့်အလမ်းကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်အတွက်သင့်လျော်။ ယခုခဲ့သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အလားအလာ၊တစ်လိင်တူယောက်ျားအပေါ်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာ၊ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အတွက်အဆင့်နှစ်:ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အစပိုင်းတွင်၊သင်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။ သင်မှလာကြပြီယုံကြည်မှုနှင့်အတွေ့အသီးအသီးအခြားစာနာ။ လျှင်ဤအခြေအနေပစ္စုပ္ပန်များမှာ၊သင်အသက်ရှင်နိုင်-မန်(ဗီဒီယိုချက်တင်၊ ကို၊စတာတွေ)၊ သို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်တယ်လီဖုန်းပြောင်းလဲဖို့လေ့။ အကယ္ဆက်သွယ်ခဲ့သည်ပြင်းထန်နှင့်အဆစ်၊လျှို့ဝှက်အခြေခံဖန်တီးခဲ့၊ဒါကြောင့်အချိန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပူးတွဲ အစီအစဉ်သူနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခု။ သင်တန်း၏၊လက်အောက်ခံလိုက္နာဘး(ဒီနေရာမှာအကြောင်းသိကောင်းစရာများ)။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်အတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပူးတွဲအစည်းအဝေးတွင်ကြားနေရာအရပျ၊ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်၊၏အဖြစ်အပျက်အရှုံးနိမ်များ၏အရက်စွဲများမှထွက်ခွာမရှိဘဲမည်သည့်အဓိက (အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးရိုက္ခ်ိဳးနှင့်အရှေ့အဘို့အသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ)။ အကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်တစ်ဖီးသို့မဟုတ်ဘားတန်းသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများအတွက်ဆွေးနွေး။ တစ်ရုပ်ရှင်ရုံကိုအစားလျော်စွာပြောတတ်ဖို့အခွင့်အပနှင့်အတူသင့်ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်။ ပိုပြီးအကြံပေးချက်များသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအစြဲတည္ေနရာ:အဘယ်မှာရှိသင်တွေ့ဆုံရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အတူသူ၏ရော။ ဒီမှာဆိုရင်၊စာနာအဖြစ်ပေးထားသောအစည်းအဝေးမှာ၊သင်ဆဲအရွေးချယ်မှုအယူအမိတ်ဖက်အပေါ် နှင့်အတူတစ်ဦးနေအိမ်သို့မဟုတ်အတူလိုက်ပါရန်။ အများကြီးနှင့်အတူအောင်မြင်ဆက်သွယ်အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္၊ကြွင်းသောအတွက်တည်ရှိသည်။) စျေးကွက်ဘာသာျပန္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအပါနှင့်။ ကီ:သင့်ရဲ့များအတွက်ပေါ်တယ်သူကသူ့ကိုရှာနေ-ရှာနေတဲ့လူအလူမိတ်ဖက်တစ်ဦးတစ်ၾကာ္ျငာမ်ား ရှာဖွေဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှဂျာမ။ ကောင်းအဆက်အသွယ်လာမယ့်တံခါးနားကနေသိလာအောင်သင်ရှာတွေ့။ အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ၊အဝိတစ်ဦးတစ်ယောက်ကျော်ချိန်းတွေ့တွေ့ဆုံရန်နှင့်ရော။
တရုတ်လူမှုမီယံဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုနှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ လူမှုတရုတ်နိုင်ငံသည်ကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအတူတကွတစ်ခုတည်းတရုတ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၊ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတရုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်။ အရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ကြောင်းမိတ်ဖက်၊သူငယ်ချင်းများ၊အေးမြသောရက်စွဲ၊သို့မဟုတ်အသက်ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်၊အဘို့ပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်ဆက်ဆံရေး။ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအွန်လိုင်းကွန်မြူနတီဘယ်မှာသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်ဗီဒီယို၊ချက်တင်နှင့်ဓါတ်ပုံလှလူပျိုနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်။အဆိုပါတရုတ်လူမှုလိုကူညီရှာဖွေပြီးပြည့်စုံသောအဖော်အနီး။ ဘာကိုတရုတ်လူမှုထူးခြားတဲ့အကြောင်းသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါလူတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်မိမိတို့အဗီဒီယို။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံ၊သူငယ်ချင်းများ၊အချိန်ဖြုန်းသည်၊ထွက်ဆွဲထားနှင့်ပင်အကောင့်တွင်ချိန်းတွေ့အရမ်းပျော်စရာဖြစ်ခဲ့ဖူး။ အခြားကွန်ယက်များ၊ကျနော်တို့ဗီဒီယိုလက္တံေ။ သူတို့ပြောတဲ့ပုံစကားလုံးတထောင်ထိုက်သည်၊တစ်ဗီဒီယိုတထောင်ထိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဗီဒီယိုများအပေါ်အခြေခံလူမှုအက္ပ္ကိုကြောင့်သင်ပိုပြီးတိတိကျကျ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျောနှင့်အတူဗီဒီယိုနှင့်ကြကုန်အံ့သောငှါကိုပြသ။ အရမ်းရှက်တင်အ။။။။။ ငါတို့သည်လည်း၊ဗီဒီယိုအများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။ သင်ချင်ကြပါဘူးရီဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများလူများနှင့်တစ်ဦးတစ်။ ထိုအခါလမ်းလျှောက်ယူသောအားဖြင့်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်ချက်ချင်းပေးပို့ဖို့လူအနီးအနားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆို။ ချက်တင်နှင့်အတူဒေသခံပြည်သူများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအချက်တင်စကားပြောဖို့လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ငါတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်၊မိတ်ဆွေများ၊သို့မဟုတ်အတွေ့စုံတွဲတစ်တွဲဖြည့်ဆည်းဖို့ယနေ့ည။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င့်။ သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အားဖြင့်ကြည့်တစ်ခုတည်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ၊နှင့်အလျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့သင်တို့အိမ်၊ကိုယ့်အပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ရှင်လာရန်၊ကျနော်တို့ကမခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကူညီချင်ရေခဲကိုချိုးဖျက်။ ဟဲ။ ေအနေနဲ့န့်အသတ်အရေအဆေ့၊ဓာတ်ပုံများ၊နှင့်ဗီဒီယိုအသီးအသီးအခြား။ ရှာဖွေရက်စွဲတစ်ခု၊အစည်းအဝေးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊စကားပြော၊အချင်းချင်းသိရန်လွယ်ကူခဲ့ဖူးခဲ့သည်။ နှင့်အားလုံး၏အကောင်းဆုံး၊ဒီ အခမဲ့။ သော့ချက်စာလုံးများထည့်သွင်းခြင်းဖော်ပြရန်ကြောင်းဂိမ်းများလျှောက်လွှာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဤဂိမ်းနှင့်အသုံးချပြီးမှတ်မိဖို့အခြားအသုံးပြုသူများ၏ချိန်းတွေ့။။။။။.
ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဉာဏ်တွေမတော်တဆ သင်တန်း၏၊ထိုသို့ဖြစ်ရကောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာအကူအညီမှာအရပ်မတော်တဆမီတာအလျက်ရှိသည်။ သို့သော်၊အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့နေ၊အဆင်သင့်ဖြစ်သည္။ အားကိုးဖို့ကျွန်မတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအမှု-ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဆိုပါအေးဂျ။ ဒီမကြာခဏဦးဆောင်ဖြစ်ပျက်၏ဥပဒေရေးရာအမှားအယွင်း၊အရာခက်ခဲများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်နိုင်မှန်ကန်သောအနာဂတ်မှာ။ အချို့ယာဉ်မောင်းယုံကြည်ကြောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ကြသည်အဆိုပါဒီဂရီ၏အမှားများအသီးအသီးပါဝင်သူအများအသွားအလာမတော်တဆမှု၊ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်သာထင်ရှားအခြေအနေ(အဆီးအတား၊အသွားအလာမှာအနီရောင်အလင်း)။ နှင့်ဤ-မအမြဲ။ အများစု၏ယန္တရားများ၏ဖြစ်ပျက်အဖြစ်မျှလောက်ဆိုးသောအရန်ခက်ခဲသည်ချက်ချင်းည့်နေရာကိုအကဲဖြတ်ရန်အခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးပါတယ်၊အဘယ်မှာရှိ။ လမ်းညွှန်၊အကြောင်းအပြုအမူမှာမတော်တဆ: ရှိပါတယ်လျှင်ဒဏ်ရာအတြင္းလူနာ။ ချက်ချင်းပြီးနောက်မတော်တဆမှု၊ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့်အညီအပိုဒ် ၂။၅။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလမ္း-ရပ်တန့်နှင့်မထိဘူး၊ကား၊အလှည့်တွင်နှိုးဆော်;မရွှေ့ပါနဲ့မည်သည့်အရာဝတ္ထုနှင့်ဆက်စပ်သောမတော်တဆထိခိုက်စေမလိုလုပ်ဖို့ကိုအခြားသူများ။ ကျမအဖို့ဖျောင်း"ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲရဲတပ်ဖွဲ့"၊ဖုန်းဆက်ဖို့သေချာပါရဲ။ စံချိန်အားလုံးသက်သေများ၏မတော်တဆဖြစ်မှု။ မပြရဲသူအဝိဇ္ဇာ၏အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကောစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ မချန်မထားပါယာဥ္မွတ္ပုံတစ်ဦးတည်းနှင့်အတူအခြားပါတီမှမတော်တဆ။ မပြလွန်းကောင်းသောအအသိပညာ၏ဥပဒေများနှင့်အမိန့်များမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များ၏မတော်တဆဖြစ်မှု။ အသေးစားဇန္ဒား၏အရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေး၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုကောကူညီပေးနိုင်ဖို့အနာဂတ်၌အမှုကိစ္စဖြေရှင်းသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်။ သေချာအောင်အားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်မှတ်တမ်းတင်အတွက်မိနစ်။ မဆိုင္းမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများသောနည်းလမ်းများအသင့်အမှားလျှင်ထိုသို့မဟုတ်ပါကသတ်မှတ်ထားသောသင်သည်မကျင့်နှင့်အတူသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်၏အစစ်ဆေးနှင့်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့၊အဆက်အသွယ်အရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေ။
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့်ရှေ့နေနှင့်အတူအွန်လိုင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချက်ပေးပေါ်တွင်ဤအရင်းအမြစ်၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့အွန်လိုင်းနှင့်အတူငါ့အလေ့အကျင့်များ၊စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အကြောင်းအရာပါ။ အားလုံးသတင်းအချက်အမှတဆင့်ရရှိသောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတင်းကျပ်စွာလျှို့ဝှက်ထား။ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်သည်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းပေးအပ်ခြင်းအတွက်ဥပဒေအထောက်အကူ။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအတွက်၎င်း၏သင်တန်းကိုအ ၏ပြဿနာ၊အရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေပူဇော်ပါမည်အများစုဟာသစ္စာရှိသူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ ရှိပါကသင်သည်တိုင်ပင်တစ်စုံတစ်ဦး၊သင်ရှိပါကယခင်ကပေးထားသောအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူငါ့သင်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ငါ့အတွက်အရည်အချင်းနှင့်ကွာခြားချက်ခံစား။ အကြံဉာဏ်သင်အွန်လိုင်းရယူနိုင်လို့နာရီပတ်ပတ်လည်။
ဘုတ်အဖွဲ့၏ထောက်ခံသူများ သည်အကျိုးမရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အခြေခံပြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်သရုပ်ဆောင်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအညာဉ်အတည်ပြုပြီး၎င်း၏တည်ထောင်သူက၊သူတို့နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်။ တရားဝင်ကုမ္ပဏီများကဖန်တီးသူအရှေ့နေများလက်ခံရရှိ၏အဆင့်အတန်းရှေ့နေနှင့်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပညာေနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပညတ်တရား၏။ ဥပဒေကြောင်းအရအဆိုပါကုမ္ပဏီသည်အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်၏စည်းမျဉ်းများအရပ်ဘက်ဥပဒေအပေါ်အကျိုးအမြတ်မယူအဖွဲ့အစည်း။ တရားဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ဖို့အကာအကွယ်အခြင့္အေရးႏွင့္ဥပေဒအနိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊အငြင်းပွားနှင့်ပဋိပက္ခများ၊အရှေ့တောင်ဥပဒေအထောက်အကူ။ အပေါ်အခြေခံဥပဒေကြောင်းအရကုမ္ပဏီ၎င်း၏တည်ထောင်သူရကြလိမ့်မည်မှဘားကာင္စီ၏မိတ္တူကိုစာချွန်နှင့်ဆောင်းပါးများကိုအများအသင်းနှင့်သတိထားမိရာေနရာဥပဒေကြောင်းအရကုမ္ပဏီ၊ထိုလေ့ကျင့်ခန်း၏အတယ်လီဖုန်းနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးအကြားဘားကောင်စီဥပဒေနှင့်ကုမ္ပဏီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံတည်ထောင်သူ။ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းများအဝင်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်အပေါ်အခြေခံသောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြလျှောက်ထားသည်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ရေး၏ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းနှင့်နိဒါန်း၏ပြောင်းလဲမှုသို့ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်မည်၊အရာပါရှိသည်အပြည့်အဝနှင့်(ရရှိနိုင်သောလျှင်)တိုကောက်အမည်အပါအဝင်၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်၊စီးပွားဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ရုရှား။ လိုလျှင်အတွက်အရေးပါစာရွက်စာတမ်းများ၏တရားဝင်အမည်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထား၏တဦးတည်းဘာသာစကားလူမျိုး၏တိုင်းပြည်(သို့မဟုတ်)အတွက်ဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့အတွက်မှတ်ပုံတင်ရမည်လည်းပါဝင်၏နာမတော်ကိုအဆိုပါတရားဝင်အတွက်အဲဒီဘာသာစကား၊ဥပေဒပုံစံ;လိပ်စာ(တည်နေရာ)၏အဆက်မပြတ်လည်ပတ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်၏တရားဝင်အမည်(အမှုအတွက်ရှိခြင်း၏အမြဲတမ်းအမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်၏တရားဝင်)၊အခြားအာဏာပိုင်သို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအဖို့အခွင့်အာဏာ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်တရားဝင်မပါဘဲ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၊ သောဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူတရားဝင်; အဆိုပါနည်းလမ်းကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏တရားဝင်(သို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ဦးနှင့်);သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံတည်ထောင်သူများတရားဝင်;မိတ္တူများ၏အရေးပါစာရွက်စာတမ်းများ၏တရားဝင်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်;ဆက်ခံအတွက် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီး၏ရလဒ်အဖြစ်တစ်ဦးနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း၊တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၊အရေးပါစာရွက်စာတမ်းများအက္ဖ္ေအတွက်ကွန်နှင့်အတူတစ်ဦးနှင့်အတွက်အဖြစ်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ရပ်စဲစစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးနှင့်; နေ့စွဲများအမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အပြောင်းအလဲအတွက်အရေးပါစာရွက်စာတမ်းများ၏တရားဝင်အဖွဲ့၊သို့မဟုတ်အတွက်ကိစ္စရပ်များအားဥပဒေ၊အရက်စွဲ၏လက်ခံရရှိ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောခန္ဓာကိုယ်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအပြောင်းအလဲလုပ်မှမဲဆန္ဒနယ်ပိနည်းလမ်းစဲများ၏လှုပ်ရှားမှုများတရားဝင်(မှတဆင့်တစ်ဦးနှင့်သို့မဟုတ်အားဖြင့်သိမ်း);အရွယ်အစားအတွက်သတ်မှတ်ထားသောမဲဆန္ဒနယ်စာရွက်စာတမ်းများ၏စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအင္ခြင့္ျ(ရှယ်ယာမြို့တော်၊င့္ပိုင္ရွင္ရန်ပုံငွေ၊မျှဝေမှုများစသည်တို့ကို။); မျိုးရိုးအမည် ပြင်နှင့်နေ၏အၿငိမ္းမပါဘဲ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်လူတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ၊နှင့်လည်းဝယ္ဖိုအချက်အလက်များထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏အခြားဝိသေသလက္ခဏာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ၊ပညတ်တရားနှင့်အခွန်ထမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းအရေအတွက်ကိုဆိုရင်၊မည်သည့်;အချက်အလိုင္စင္မ်ားအားဖြင့်လက်ခံရရှိအဆိုပါတရားဝင်။
Chatroulette Tunis-Chat-chat pa pagesë video me të rastit të huaj
သာ ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်င့် ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ သိမှရ ၄၅ အဝတ်အချည်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အခမဲ့မိန်းကလေးများ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း
© 2021 ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။